September 20, 2021 – Shwe Myanmar
ဒီပြတင်းပေါက်တွေ ကနေ နေ့တိုင်း ဦးဖိုးရှိပစ်ချ မဲ့ခေါင်းအုံးကို မယား အယောက် ၃၀ က စောင့်ဖမ်းကြသတဲ့
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ သာစည်နယ်မှာ ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနေကြတုန်း နာမည်ကြီးနေတုန်း …
စံပြ ပြောဆိုနေရတုန်း အဘယ်သို့ကြောင့်ဆိုတော် ဦးဘိုးရှိတွင် စားရင်းရှိ မယား ၃၃ ယောက် ရှိသည် ဦးဘိုးရှိက လယ် ဧက သောင်းချီ ပိုင်တယ်ဆိုပဲ ..
တနှစ်တနှစ် သီးစားချ သည်ရော .. လယ်စာရင်းငှါးများ ရာသီသီနှံပေါ်ချိန်ဆို မိသားစုလိုက် လာကန်တော့ကြရသည် ..ထိုအချိန် တွင် သမီးပျို ချောချောမောမော ပါလာပါက..
ဦးဘိုးရှိ သဘောကျလို့ ထားခဲ့ ဆိုလျင် ထားခဲ့ပေပဲ… မထားခဲ့ လို့ကတော့ နောက်နှစ်သူ့လယ် မှာ အလုပ်မရဘူးသာမှတ်
အဲ့လိုဒီလိုနဲ့ သူကြိုက်ရာ ယူထားတာ စာရင်း ရှိကြီး ၃၃ေ ယာက် ကြုံဒိုးလေးတွေက ပါသေးဆိုဘဲ …ဦးဘိုးရှိက ၃ ထပ်တိုက် နဲ့နေတာ ..
တိုက်အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဇာတ်စင် ကြီးဆောက်ထားသတဲ့ဇာတ်ခေါ် က ရင် ‘ သုရောနန္ဒီ ဇာတ် ‘ ဘဲ ကခိုင်း သတဲ့ . ဘာလို့တုန်း ဆိုတော့အဲ့ဇာတ်က မင်းသမီး ကို ဂဠုန် ချီတဲ့အခန်းပါ ဆိုဘဲ။
အဲ့အခန်းရောက်ရင် ဦးဘိုးရှိက ဂဠုန် ခေါင်းဆောင်း ကြီး စွပ်ပီး သူကိုယ်တိုင် မင်းသမီး ကို ပွေ့ချီပီး သုတ်လေ့ရှိသတဲ့ …. ဦးဘိုးရှိက
အဲ့ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်းကို အပိုင်ဝယ်ထားတာ… ဇာတ်ကြည့်ရင် ဘေးနားအဲ့ ခေါင်းဆောင်း ထားကြည့်ရော … မင်းသမီးကို ဂဠုန် သုတ်ပြေးတဲ့အခန်းကလည်း …
ဂဠုန်က အသုတ် ဇာတ်စင် မီးတွေကမှိတ် ပေး .. စင် ကိုအမှောင်ချအဲ့လို ကွက်တိဖြစ်ရတာ…
ပီးရင် ဦးဘိုးရှိက မင်းသမီးကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြေးရော သူနဲ့ အဆင်ပြေသွားရင် အဲ့ည ဇာတ် ဆက်ကစရာ မလို တော့ဘူး ပြီးဘီ …. အဲ့ မင်းသမီးက ငြင်းဆန်နေရင်တော့ ဇာတ်ဆက်ကရတယ် .. နောက်လဲမငှါးတော့ဘူး
အဲ့လို ပြတ်သားတာ ဦးဘိုးရှိက တခါ က ညောင်ကန် မင်းသမီး ဇာတ်လာကတယ် မင်းသမီး ကငယ်လဲ ငယ် ချောကလဲချော ဆိုတော့ ဦးဘိုး ရှိ မနေနိုင်ဘူး ….
ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်းဘေးချပီး သူ့ဇာတ်ဖြစ်တဲ့ သုရောနန္ဒီ ကခိုင်း… မင်းသမီး ဂဠုန်ချီတဲ့အခန်းလဲရောက်ကော .. ဘာပြောကောင်းမတုန်း မင်းသမီးချီပီး သူ့အခန်းထဲ ဝင်ပြေးပါရော…
မင်းသမီး က လုံးဝ သဘောမတူဘဲ ပြဿနာ တက်ပီး မင်းသမီး ချက်ချင်း ပြန်ပါလေရောလား … ဦးဘိုးရှိလဲ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့ကျန်ခဲ့တာ…..တပတ်လောက် ဦးဘိုးရှိ အသဲကွဲနေတော့ တငူငူ တငိုင်ငိုင် ….
ဒါနဲ့ ဦးဘိုးရှိ မယားတွေလဲ မနေနိုင် အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပီး မယားကြီးနဲ့ အခြားမယား၅ ယောက်တို့ ညောင်ကန်ရွာ လိုက်ပီး
မင်းသမီးကိုဖျောင်းဖျ ကြတာ ၂ ရက်ကြာသတဲ့ … နောက်တော့ မင်းသမီးလဲ လိုက်လာပေးသတဲ့ ဗျာ…. ဦးဘိုးရှိက အဲ့လို ပိုင်တာ….
ဒီတော့ ဒီနယ်တဝိုက် ဦးဘိုးရှိ ဆိုရင် ယောက်ကျား သားတွေရဲ့ အိုင်ဒေါ ဖြစ် ကရောပေါ့ …. ကိုယ်လည်း ကြားကြားချင်း ဦးဘိုးရှိ ကို ကြည်ညို လိုက်တာဆိုတာ ..
သူ့အိမ်ကြီးသွားကြည့်ရတဲ့ အထိပါပဲ ကဲ မုံရွာသားတွေ သာစည် သားတွေ ဂုဏ်ယူရ တဲ့ ဦးဘိုးရှိ ဆိုတာ ဒါဘဲ ကလား…
မူရင်းတင်သူအား လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်
ဒီပွတငျးပေါကျတှေ ကနေ နတေို့ငျး ဦးဖိုးရှိပဈခြ မဲ့ခေါငျးအုံးကို မယား အယောကျ ၃၀ က စောငျ့ဖမျးကွသတဲ့
စဈကိုငျးတိုငျး မုံရှာ သာစညျနယျမှာ ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနကွေတုနျး နာမညျကွီးနတေုနျး …
စံပွ ပွောဆိုနရေတုနျး အဘယျသို့ကွောငျ့ဆိုတျော ဦးဘိုးရှိတှငျ စားရငျးရှိ မယား ၃၃ ယောကျ ရှိသညျ ဦးဘိုးရှိက လယျ ဧက သောငျးခြီ ပိုငျတယျဆိုပဲ ..
တနှဈတနှဈ သီးစားခြ သညျရော .. လယျစာရငျးငှါးမြား ရာသီသီနှံပျေါခြိနျဆို မိသားစုလိုကျ လာကနျတော့ကွရသညျ ..ထိုအခြိနျ တှငျ သမီးပြို ခြောခြောမောမော ပါလာပါက..
ဦးဘိုးရှိ သဘောကလြို့ ထားခဲ့ ဆိုလငျြ ထားခဲ့ပပေဲ… မထားခဲ့ လို့ကတော့ နောကျနှဈသူ့လယျ မှာ အလုပျမရဘူးသာမှတျ
အဲ့လိုဒီလိုနဲ့ သူကွိုကျရာ ယူထားတာ စာရငျး ရှိကွီး ၃၃ေ ယာကျ ကွုံဒိုးလေးတှကေ ပါသေးဆိုဘဲ …ဦးဘိုးရှိက ၃ ထပျတိုကျ နဲ့နတော ..
တိုကျအောကျဆုံးထပျမှာ ဇာတျစငျ ကွီးဆောကျထားသတဲ့ဇာတျချေါ က ရငျ ‘ သုရောနန်ဒီ ဇာတျ ‘ ဘဲ ကခိုငျး သတဲ့ . ဘာလို့တုနျး ဆိုတော့အဲ့ဇာတျက မငျးသမီး ကို ဂဠုနျ ခြီတဲ့အခနျးပါ ဆိုဘဲ။
အဲ့အခနျးရောကျရငျ ဦးဘိုးရှိက ဂဠုနျ ခေါငျးဆောငျး ကွီး စှပျပီး သူကိုယျတိုငျ မငျးသမီး ကို ပှခြေီ့ပီး သုတျလရှေိ့သတဲ့ …. ဦးဘိုးရှိက
အဲ့ဂဠုနျခေါငျးဆောငျးကို အပိုငျဝယျထားတာ… ဇာတျကွညျ့ရငျ ဘေးနားအဲ့ ခေါငျးဆောငျး ထားကွညျ့ရော … မငျးသမီးကို ဂဠုနျ သုတျပွေးတဲ့အခနျးကလညျး …
ဂဠုနျက အသုတျ ဇာတျစငျ မီးတှကေမှိတျ ပေး .. စငျ ကိုအမှောငျခအြဲ့လို ကှကျတိဖွဈရတာ…
ပီးရငျ ဦးဘိုးရှိက မငျးသမီးကို အခနျးထဲ ချေါပွေးရော သူနဲ့ အဆငျပွသှေားရငျ အဲ့ည ဇာတျ ဆကျကစရာ မလို တော့ဘူး ပွီးဘီ …. အဲ့ မငျးသမီးက ငွငျးဆနျနရေငျတော့ ဇာတျဆကျကရတယျ .. နောကျလဲမငှါးတော့ဘူး
အဲ့လို ပွတျသားတာ ဦးဘိုးရှိက တခါ က ညောငျကနျ မငျးသမီး ဇာတျလာကတယျ မငျးသမီး ကငယျလဲ ငယျ ခြောကလဲခြော ဆိုတော့ ဦးဘိုး ရှိ မနနေိုငျဘူး ….
ဂဠုနျခေါငျးဆောငျးဘေးခပြီး သူ့ဇာတျဖွဈတဲ့ သုရောနန်ဒီ ကခိုငျး… မငျးသမီး ဂဠုနျခြီတဲ့အခနျးလဲရောကျကော .. ဘာပွောကောငျးမတုနျး မငျးသမီးခြီပီး သူ့အခနျးထဲ ဝငျပွေးပါရော…
မငျးသမီး က လုံးဝ သဘောမတူဘဲ ပွဿနာ တကျပီး မငျးသမီး ခကျြခငျြး ပွနျပါလရေောလား … ဦးဘိုးရှိလဲ ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျနဲ့ကနျြခဲ့တာ…..တပတျလောကျ ဦးဘိုးရှိ အသဲကှဲနတေော့ တငူငူ တငိုငျငိုငျ ….
ဒါနဲ့ ဦးဘိုးရှိ မယားတှလေဲ မနနေိုငျ အခငျြးခငျြးတိုငျပငျပီး မယားကွီးနဲ့ အခွားမယား၅ ယောကျတို့ ညောငျကနျရှာ လိုကျပီး
မငျးသမီးကိုဖြောငျးဖြ ကွတာ ၂ ရကျကွာသတဲ့ … နောကျတော့ မငျးသမီးလဲ လိုကျလာပေးသတဲ့ ဗြာ…. ဦးဘိုးရှိက အဲ့လို ပိုငျတာ….
ဒီတော့ ဒီနယျတဝိုကျ ဦးဘိုးရှိ ဆိုရငျ ယောကျကြား သားတှရေဲ့ အိုငျဒေါ ဖွဈ ကရောပေါ့ …. ကိုယျလညျး ကွားကွားခငျြး ဦးဘိုးရှိ ကို ကွညျညို လိုကျတာဆိုတာ ..
သူ့အိမျကွီးသှားကွညျ့ရတဲ့ အထိပါပဲ ကဲ မုံရှာသားတှေ သာစညျ သားတှေ ဂုဏျယူရ တဲ့ ဦးဘိုးရှိ ဆိုတာ ဒါဘဲ ကလား…
မူရငျးတငျသူအား လေးစားမှုဖွငျ့ ခရကျဒဈ
“ကလေးတှစေားကွတဲ့ ဂယျြလီတှကေို ဘယျကနေ ပွုလုပျသလဲဆိုတာ သငျသိပါသလား”
ဂျယ်လီဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေး နှစ်သက်စွာစားသုံးကြတဲ့ အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာဆိုလဲမမှားပါဘူးနော် စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အလွန်အရသာရှိလှတဲ့ ဂျယ်လီလေးတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင်ဂျယ်လီတစ်ထုပ်ကိုဝယ်ပြီး အနောက်မှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်တဲ့ သကြား၊ အသီးအနှံအရသာတို့ အပြင် Gelatin ဆိုတဲ့အရာတစ်မျိုးကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကြည့်ရင် Gelatin ဟာတခြားပါဝင် ပစ္စည်းတစ်မျိုး အမည်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူဟာအနံ့မရှိ၊ အရသာမရှိတဲ့ အဝါရောင်စေးကပ်ကပ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဘယ်နေရာကနေ ရသလဲဆိုတော့ တိရစ္ဆာန်အရေခွံနဲ့ အရိုးတွေကို အကြာကြီး ပြုတ်ထားပြီးမှ နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းလို့ဆိုပါ
တယ်ဒီတိရစ္ဆာန် အရေခွံနဲ့ အရိုးတွေကို စက်ရုံတွေကနေ မလိုအပ်ပဲ စွန့်ပစ်တဲ့ နေရာမှာ ရလာတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ Gelatin ဟာအဆိုးကြီး လဲမဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာအာဟာရ ဖြစ်စေပြီး အမိုင်နိုအက်ဆစ် (၁၈)မျိုးတောင် ပါဝင်တယ် လို့သိရပါတယ်။
ဒီGelatin ကိုအခြားသော အချိုစားစရာတွေနဲ့ ဆေးဝါးအချို့မှာလဲ သုံးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာသတ်သတ်လွတ် သမားတစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီဝါးလို့ကောင်းတဲ့ ဂျယ်လီတွေ မစားမိဖို့လိုပြီနော်။ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေလဲ ဗဟုသုတ ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ဂယျြလီဟာ လူကွီးလူငယျမရှေး နှဈသကျစှာစားသုံးကွတဲ့ အစားအစာပဲဖွဈပါတယျ။
ကလေးငယျတှအေတှကျလညျး အလှနျကွိုကျနှဈသကျတဲ့အစားအစာဆိုလဲမမှားပါဘူးနျော စာဖတျပရိတျသတျတှအေတှကျ အလှနျအရသာရှိလှတဲ့ ဂယျြလီလေးတှအေကွောငျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သငျဂယျြလီတဈထုပျကိုဝယျပွီး အနောကျမှာပါတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ ပုံမှနျသဘာဝဖွဈတဲ့ သကွား၊ အသီးအနှံအရသာတို့ အပွငျ Gelatin ဆိုတဲ့အရာတဈမြိုးကိုပါ တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျကွညျ့ရငျ Gelatin ဟာတခွားပါဝငျ ပစ်စညျးတဈမြိုး အမညျလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတော့ သူဟာအနံ့မရှိ၊ အရသာမရှိတဲ့ အဝါရောငျစေးကပျကပျ ပစ်စညျးတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုဘယျနရောကနေ ရသလဲဆိုတော့ တိရစ်ဆာနျအရခှေံနဲ့ အရိုးတှကေို အကွာကွီး ပွုတျထားပွီးမှ နောကျဆုံး ထှကျလာတဲ့ ပစ်စညျးလို့ဆိုပါတယျ
ဒီတိရစ်ဆာနျ အရခှေံနဲ့ အရိုးတှကေို စကျရုံတှကေနေ မလိုအပျပဲ စှနျ့ပဈတဲ့ နရောမှာ ရလာတယျလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ တကယျတော့ Gelatin ဟာအဆိုးကွီး လဲမဟုတျပါဘူး။ သူဟာအာဟာရ ဖွဈစပွေီး အမိုငျနိုအကျဆဈ (၁၈)မြိုးတောငျ ပါဝငျတယျ လို့သိရပါတယျ။
ဒီGelatin ကိုအခွားသော အခြိုစားစရာတှနေဲ့ ဆေးဝါးအခြို့မှာလဲ သုံးတယျလို့ သိရပါတယျ။ အကယျ၍ သငျဟာသတျသတျလှတျ သမားတဈယောကျ ဖွဈမယျဆိုရငျ ဒီဝါးလို့ကောငျးတဲ့ ဂယျြလီတှေ မစားမိဖို့လိုပွီနျော။ ခဈြပရိတျသတျတှလေဲ ဗဟုသုတ ရရှိလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။ အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
“ငှေ(၁၅)သိနျးလောကျကုနျကမြခံပဲ သားအိမျအကြိတျကို ပြောကျသှားစနေိုငျသညျ့ မွနျမာ့ဆေးနညျး”
အစာအိမ်ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲသောက်နိုင်ပါတယ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။ အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ်….
အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။သဘောပင်အဖိုအမသိချင်ရင်အမြစ်အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။ ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် ….
မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါအစာအိမ်ဝေဒနာလံုးဝမရှိပါကြောင်း တဲ့ဗျာ…..။ ငွေ(၁၅)သိန်းလောက်ကုန်တာတောင်မပျောက်တဲ့ သားအိမ်အကြိတ်ကို သင်္ဘောဖိုပင်အစွမ်းကြောင့်ပျောက်ကင်း
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မြန်မာပီပီအချို့က ဗိုက်ကြီးတယ်ပြောလို့ပြော လင်ပြောရမှာရှက်တာနေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတွေကလဲရိုးချက်သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများပြောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတင်ပြီး မကြည်ပါတော့တယ်။ ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထက် ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှု့ဒဏ်ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိန်ခြုံးချိလာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတင်ပြီးတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာကနေကလေးမလေးမှာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း
ရောဂါနုပေမဲ့ မိဘတွေရဲ့ ပေါဆမှု့ကြောင်း ရောဂါရင့်ကြပ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဓတ်ကင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်တွေ က မယ်သီလရှင် ခေါင်းတိုင်းဖြစ်နေပါတော်သည်။
အစ ပထမပတ်တက်ရင်းနဲ့ကိုငွေ ၁၀သိန်းကျော်လောက်ကုန်ခဲ့ပါပြီး အခြေခံလူတန်းစားဆိုတော့နဲနဲငွေအင်းအားလဲ ချိနေပြီးရှာနေရပါပြီး။ ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်လပတ်ကြာတော့ ဓတ်ဒုတိယအကြိမ် ကင်ရတော့မဲ့အချိန်မှာ . မိခင်မှာ သူတွက် ငွေးတိုး ၁၅သိန်းချီးလာပြီးဆိုတာ ကောင်မလေးကလဲ သိနေပါတော့သည်။
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ ပျောက်မယ်ဆိုတာ အာမခံကုသာကုနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပြန်လာတော့ အခြေမဟန် ဆက်ကုဖို့လဲငွေအားကမနိုင်ဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမေရယ်..သမီးမခံစားနိုင်တော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသေသာခံလိုက်ပါတော့မည်ဆိုပြီးငိုပါလေရောလား။ ကျွန်တော် လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ပေါ်က သဘောင်္ရွက်အကြောင်းက စာဖတ် ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်ပင်တယ်။
ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော့် ကိုယုံလို့ရင်ကျွန်တော် ပြောတဲ့ ဆေးနည်းကိုသောက်မှာလား ကျွန်တော် ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ ။ မအေကမလုပ် သမီးကတော့အကိုရယ် ကျမသေလူပဲ အကိုဘာနေနေ သမီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုသောက်ပါမယ်လို့ ကောင်မလေးက ခတ်ချိချိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပြောရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ဈေးရောင်းသွားရင်.ကုသိုလ် နေစဉ်ရအောင် သင်္ဘော(အဖို)ရောက်လေအရပ်တိုင်းရှာခူးပါတော့တယ်၊။
သင်္ဘောရွက် (အဖို) ကို ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းပြီး အဖတ်ကို ပိတ်ဖြူထဲထည့် အရည် သီးသန့်ဖြစ်အောင် ညှစ်ချပြီး တနေ့ (အကြမ်းပန်းကန်လုံး) ၁ခွက် ကနေ ၂ ခွက် အများဆုံး သောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရက်ကြာတော့ ကောင်မလေး ဆံပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်စပေါက်လာတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလာပါတယ်။
အစားကလဲ လူသာပိန်နေပေမဲ့ ဘယ်အစားအစားမှမရှောင်တော့ပါဘူး။နောက်တစ်လလောက်နေတော့ လူက ပြည့်ပြည့်၀၀ နဲနဲဖြစ်လာတော့ ကောင်မလေးက ဆေးရုံကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားချင်နေပါတော့တယ်။ သူသွားချင်တဲ့အကြောင်းရင်းက သူရောဂါအခြေနေကို သိချင်နေတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြရင်မနက်ဆေးရုံသွား ချက်ချင် ဆရာဝန်ကလဲ အန့်တွေအော ကျွန်တော် ဖို့လဲ မုန့်တွေဝယ်လာပြီး
အကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတွေသောက်တာလဲ မေးနေတယ်တဲ့ ။ကျွန်တော် ဗျာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့ သေမင်းရောဂါသယ်က ပျောက်ကင်းသွားတော့ဘဝမှာ အတော်ကို ပီတိဖြစ်တဲ့နေ့ပဘဲ ဒါကြောင့် သင်္ဘောရွက်သည် ထိုရောဂါတစ်ခုထဲကိုသာပျောက်စေတာမဟုတ်ပဲ အမျိုးမျိုးသော အရာဆဲလ်တွေအမြစ်တွေကိုခြေနိုင်စွမ်းရှိတာမို့
အစာအိမျွဖွဈတဲ့သူတှလေဲသောကျနိုငျပါတယျအရမျးကောငျးပါတယျ။အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။ အကွမျးပနျကနျလုံးနဲ့မနကျတခှကျညတခှကျသောကျပေးပါတပါတျအတှငျးသိသာလာလိမျ့မယျ….
အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။သဘောပငျအဖိုအမသိခငျြရငျအမွဈအဖြားကိုကွညျ့ပါ အမွဈအခှပါရငျအမ အခှမပါရငျအဖို ။ ကနြျောကတော့သင်ျဘောရှကျလတျလတျဆတျဆတျကို ပွုတျလညျးစားတယျ ….
မီးမွှိုကျပွီးလညျး ရစေငျစငျဆေး ငပိခကျြနဲ့တို့စားပါတယျထူးခွားခကျြကတော့ကနြျောဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါအစာအိမျဝဒေနာလံုးဝမရှိပါကွောငျး တဲ့ဗြာ…..။ ငှေ(၁၅)သိနျးလောကျကုနျတာတောငျမပြောကျတဲ့ သားအိမျအကွိတျကို သင်ျဘောဖိုပငျအစှမျးကွောငျ့ပြောကျကငျး
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မွနျမာပီပီအခြို့က ဗိုကျကွီးတယျပွောလို့ပွော လငျပွောရမှာရှကျတာနမှောဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတှကေလဲရိုးခကျြသားသမီးကိုမယုံပဲ သူမြားပွောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတငျပွီး မကွညျပါတော့တယျ။ ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထကျ ပတျဝနျးကငျြရိုကျခကျမှု့ဒဏျကွောငျ့ ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ ပိနျခွုံးခြိလာပါတော့တယျ။ဒီလိုနဲ့ မဖွဈတဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတငျပွီးတကျဖို့ ဆုံးဖွတျရာကနကေလေးမလေးမှာ စဖွဈဖွဈခငျြး
ရောဂါနုပမေဲ့ မိဘတှရေဲ့ ပေါဆမှု့ကွောငျး ရောဂါရငျ့ကွပျနခေဲ့ပါပွီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သအိမျထဲမှာ အကွိတျကငျဆာဖွဈနပွေီးဆိုတာ စဈဆေးခကျြထှကျလာပါတော့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဓတျကငျရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါငျးမှာလဲ ဆံပငျတှေ က မယျသီလရှငျ ခေါငျးတိုငျးဖွဈနပေါတျောသညျ။
အစ ပထမပတျတကျရငျးနဲ့ကိုငှေ ၁၀သိနျးကြျောလောကျကုနျခဲ့ပါပွီး အခွခေံလူတနျးစားဆိုတော့နဲနဲငှအေငျးအားလဲ ခြိနပွေီးရှာနရေပါပွီး။ ဒီလိုနဲ့ နောကျတဈလပတျကွာတော့ ဓတျဒုတိယအကွိမျ ကငျရတော့မဲ့အခြိနျမှာ . မိခငျမှာ သူတှကျ ငှေးတိုး ၁၅သိနျးခြီးလာပွီးဆိုတာ ကောငျမလေးကလဲ သိနပေါတော့သညျ။
ဆရာဝနျကွီးကလဲ ပြောကျမယျဆိုတာ အာမခံကုသာကုနရေတယျ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပွနျလာတော့ အခွမေဟနျ ဆကျကုဖို့လဲငှအေားကမနိုငျဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမရေယျ..သမီးမခံစားနိုငျတော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသသောခံလိုကျပါတော့မညျဆိုပွီးငိုပါလရေောလား။ ကြှနျတျော လဲ အဲ့အသံကွား Facebook ပျေါက သဘောင်ျရှကျအကွောငျးက စာဖတျ ဒီလိုနဲ့ သှားတိုငျပငျတယျ။
ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယျ ကြှနျတေျာ့ ကိုယုံလို့ရငျကြှနျတျော ပွောတဲ့ ဆေးနညျးကိုသောကျမှာလား ကြှနျတျော ရှာပေးမယျဆိုတော့ ။ မအကေမလုပျ သမီးကတော့အကိုရယျ ကမြသလေူပဲ အကိုဘာနနေေ သမီးအဆငျပွမေယျဆိုသောကျပါမယျလို့ ကောငျမလေးက ခတျခြိခြိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပွောရှာပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျော ဈေးရောငျးသှားရငျ.ကုသိုလျ နစေဉျရအောငျ သင်ျဘော(အဖို)ရောကျလအေရပျတိုငျးရှာခူးပါတော့တယျ၊။
သင်ျဘောရှကျ (အဖို) ကို ငရုတျဆုံထဲ ထညျ့ထောငျးပွီး အဖတျကို ပိတျဖွူထဲထညျ့ အရညျ သီးသနျ့ဖွဈအောငျ ညှဈခပြွီး တနေ့ (အကွမျးပနျးကနျလုံး) ၁ခှကျ ကနေ ၂ ခှကျ အမြားဆုံး သောကျခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရကျကွာတော့ ကောငျမလေး ဆံပငျတဈပငျနှဈပငျစပေါကျလာတာကို ကြှနျတျော သတိထားမိလာပါတယျ။
အစားကလဲ လူသာပိနျနပေမေဲ့ ဘယျအစားအစားမှမရှောငျတော့ပါဘူး။နောကျတဈလလောကျနတေော့ လူက ပွညျ့ပွညျ့၀၀ နဲနဲဖွဈလာတော့ ကောငျမလေးက ဆေးရုံကိုတဈခေါကျလောကျသှားခငျြနပေါတော့တယျ။ သူသှားခငျြတဲ့အကွောငျးရငျးက သူရောဂါအခွနေကေို သိခငျြနတေဲ့ ဆန်ဒ ပွငျးပွရငျမနကျဆေးရုံသှား ခကျြခငျြ ဆရာဝနျကလဲ အနျ့တှအေော ကြှနျတျော ဖို့လဲ မုနျ့တှဝေယျလာပွီး
အကို တဲ့ ကမြ အကွိတျမရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတှသေောကျတာလဲ မေးနတေယျတဲ့ ။ကြှနျတျော ဗြာ ဝမျးသာလိုကျတာ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့ သမေငျးရောဂါသယျက ပြောကျကငျးသှားတော့ဘဝမှာ အတျောကို ပီတိဖွဈတဲ့နပေ့ဘဲ ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောရှကျသညျ ထိုရောဂါတဈခုထဲကိုသာပြောကျစတောမဟုတျပဲ အမြိုးမြိုးသော အရာဆဲလျတှအေမွဈတှကေိုခွနေိုငျစှမျးရှိတာမို့
“ဖတျထားနျော မအားသေးရငျ ရှဲထားပါ တိုကျဆိုငျပါက လိုကျနာကငျြ့သုံး ဘေးကငျးကွပါစေ”
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ် အစွမ်း အံ့မခန်း
ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်ဟာ ဘယ်လောက်တောင်ဆေးအစွမ်းထက်သလဲဆိုတာ လက်တွေ့ သုံးစွဲဖူးသူများရဲ့တုန့်ပြန်ပြောဆိုရေသားထားသည့်
ကွန်မန့်(comments)များ ကိုစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် အစ အဆုံးကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။
တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ပါ ။ ကျွန်တော်လိပ်ခေါင်းဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။ဝမ်းသွားရင် သွေးပါတာ။ ညောင်းတာ။
မအီမလယ်နဲ့နေရတာ အရမ်းခက်ခဲ့တာ …အခုဆို အရမ်းကောင်းသွားပါပြီ။
ရှားစောင်းလက်ပက် အစိမ်းကိုမီးဖုတ်ပြီး အတိုင်းဝါးစားလိုက်ပါ ။တကြိမ်ပဲစားလိုက် သိသာပါတယ် ၂ ခါဘဲစားလိုက်တာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါပြီ ။
အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ…လိပ်ခေါင်းရောဂါ အတွက် ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းပါတဲ့ဗျား…
ကျွန်တော့်မေမေ သွေးတိုးတုန်းကဆိုရင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို အထဲက အသားကို ခြစ်ယူပီးတော့ သကြားနည်းနည်းထည့် ပြီးတော့သံပုရာသီး
တခြမ်း ညှစ်ထည့်လိုက် ပြီးတော့မွှေလိုက် ရေခဲထည့်ပြီးစားလိုက်တာ ၅ မိနစ်တောင်မကြာဘူး ။
သွေးချိန်လိုက်တော့ Nomel ပြန်ဖြစ်သွားတာ လက်တွေ့ပါဗျ သွေးတိုးသမားတွေအတွက်တော့ ဆေးကောင်းတလက်ပါဗျာ…။
ဒို့ကတော့ထက်ခြမ်းခွဲပြီး ဇွန်းနဲ့ခြစ် အနှစ်ယူကာ ပျားရည်နဲ့ ခေါက်သောက်ပါတယ်။ အဆုတ်နာတွေလဲ ကောင်းပါတယ်ဘေးမဖြစ်ပါ…။
ရှားစောင်းလက်ပတ် ဆေးနည်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများအတွက် ဆေးနည်းတစ်နည်းဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ရှားစောင်းလက်ပတ် ၂၅ ကျပ်သား၊ မုန့်လုပ်ထန်းလျှက် ၂၅ ကျပ်သား၊ မကျည်းသီးအစေ့မပါ ၁၂ကျပ်ခွဲသားကြက်သွန်နီ ၅ ကျပ်သားဆား ၁ ကျပ်သား။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ငါးမျိုးထဲမှရှေးဦးစွာ ထန်းလျှက်ကို ဒန်အိုးနှင့်အရင် ကျိုပါ။ ထန်းလျှက်ရည်ကိုစစ်ထားပါ ။ ကျန်တာတွေကိုနုတ်နုတ်စဉ်းထားပါ..။
ဆေးကျိုသည့်အခါ ငပိကျိုသော မြေအိုးတစ်လုံးလိုပါတယ် ။
မြေအိုးထဲကို ထန်းလျှက်ရည်ထည့်ပြီး ကျိုပါ ။ ကြွက်မြီးတန်လို ပျစ်လာလျှင် ကျန်တာတွေထည့်ပြီး မီးမျှင်းမျှင်းဖြင့်ကျိုပါ ။မွှေပေးပါ။
ပျစ်ခဲတဲ့အနေရောက်ရင် မီးဖိုပေါ်မှ ချထားလိုက်ပါ။ အအေးခံပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့်ထားပြီး မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ကွမ်းသီးလုံးခန့်စားပါ ။
အမျိုးသမီးများအတွက် သွေးသားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများနှင့် သွေးသားဖေါက်ပြန်ပြီး သွက်ချာပါဒ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေပြီးအသားအရည်ဝင်းပစေပါသည်။
ရှားစောင်းလက်ပက်က အပင်ပါ။ လူတော်တော်များများ သိပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးတွေမှာ ပါပါတယ်။
အသားအရေအတွက် ကောင်းလို့အလှကုန် တော်တော်များများမှာပါပါတယ်။သူကိုသုံးမယ်ဆိုဘေးကစောင်းလေးတွေကို လှီးလိုက်ပါ။
အစေးဝါဝါလေးတွေ တွေ့ရမယ် ရေဆေးလိုက်ပါ။ အလွန်ခါးပါတယ် ။ ကျန်တာအတွင်းကဂျယ်ရော အပြင်ကအခွန်ရောစားလို့ရပါတယ် ။
ကောင်းတာကတော့အားလုံးပါဘဲ .. လူတစ်ကိုယ်လုံးကို အာဟာရပေးပါတယ်။ အညာမှာ လူကြီးတွေအသက်ရှည် ကျန်းမာတာဒါတွေစားလို့ပါ။
တို့အမျိုးအားလုံး သုံးပါတယ် ။ အလွန်ကောင်းလို့ ပြောမကုန်ပါဘူး။ ဆီးဝမ်းသွေးလေ အရိုး အရေပြား မျက်စိ ဝမ်းတွင်းကလီစာ အားလုံးကိုအကျိုးပြုပါတယ်။
ကြိုက်သလိုသုံးပါ။ စားချင်သလိုစားပါ ။အားလုံးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် ။သက်ရှည် ကျန်းမာလှပ အပူငြိမ်းအားရှိ မျက်စိကြည် ဘာမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုသုံးပြီးလို့ ကျန်တဲ့အခွံကိုလဲ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး မျက်နှာတွေ လက်တွေမှာ ပွတ်ရင် အသားအရေ နုချောပြီး ဖြူဖွေးတာတကယ်ပါ ။
ကာလသားရောဂါကြီးတွေတောင် ပျောက်တယ်တဲ့ ..။သူ့အစေးကိုဖြစ်စေ အသားကိုဖြစ်စေ စားပါ ။သူ့ကြီးပဲစားလဲရတယ် တကယ်စွမ်း…။
အတွင်းသားလေးကိုခြစ်ပြီး သံပုရာရည်လေးညှစ် ကြက်သွန်နီ ပုဇွန်ခြောက်မှူန့်လေးနဲ့သုပ်စားလည်းကောင်းတယ်..။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ရှမ်းပျိုမယ်နဲ့စားရင် အသားအရေ စိုပြေပြီးပိန်သူကိုဝ စေပါတယ်။ရှားစောင်းလက်ပတ်က မြန်မာပြည်မှာရော
ဒီယိုးဒယားမှာလဲ ဟင်းချက်စားတယ်ဗျ .. တကယ်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုလို့ပြောရအုံးမယ် ။ရှားစောင်းအနှစ်ရယ် , မြန်မာကြက်ဥတလုံး ,
နှမ်းဆီကြက်ဥတလုံးစာ၃မျိုးဆတူကြော်စား သွေးထွက်နေတဲ့လိပ်ခေါင်းတကယ်ပျောက်တယ်။ လက်တွေ့ပါ…။နားကိုက်လဲ..ကောင်းတယ်..
မီးဖုတ်ပြီး..အတွင်းသားကို..နားထဲဝင်လောက်တဲ့..အချောင်းလေးလုပ်ပြီးကြပ်ပေးရင်…( တစ်ကယ်ပြောတာပါ ) ရှားစောင်း လက်ပတ် အစွမ်းကပြောမကုန်။
တစ်ခုပြောပါရစေ ။ရှားစောင်လက်ပတ် လက်နှစ်လုံးလောက်အရွယ် အလက်တစ်လက်ကိုရေစင်အောင်စေးပြီး ဘေးက အဖုလေးတွေဖယ်ပြီး
ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပါ ။ပြီးပျားရည်စစ်စစ် ဟင်းချိုသောက် ဇွန်း တစ်ဇွန်း တို့ကို ပေါင်းစပ်မွှေပြီး ဗူးအသန့်တစ်ခုအတွင်းထည့်ထားပြီး သာမန်ဇွန်းတစ်ဇွန်ခန့်သောက်ပေးပါ ။
ဆေးသောက်ပြီး ၅ မိနစ်မကြာ လေသက်ပါလိမ့်မည်။ ဘူး တစ်လုံးဆောင် အိုလို့တောင် စိတ်မဆင်းရဲရတော့ပါ ။မှတ်ချက် ။ နှစ်ရက်စာပဲဖျော်သောက်ပါ လက်ဆတ်လေကောင်းလေပါ..။
ရှားစောင်းလက်ပတ်က ဆီးကျောက်တည်တာကတော့ လက်တွေ့မို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ဆေးပင်ပါ ။ ၃ခွက်လောက်သောက်တာနဲ့ ကျောက်တွေကျ လာတော့တာပါ..။
ရှားစောငျးလကျပတျပငျဟာ ဘယျလောကျတောငျဆေးအစှမျးထကျသလဲဆိုတာ လကျတှေ့ သုံးစှဲဖူးသူမြားရဲ့တုနျ့ပွနျပွောဆိုရသေားထားသညျ့
ကှနျမနျ့(comments)မြား ကိုစုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ အစ အဆုံးကို ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပါ။
တကယျကောငျးတဲ့ ဆေးစှမျးကောငျးတဈလကျပါ ။ ကြှနျတျောလိပျခေါငျးဖွဈနတော ကွာပါပွီ။ဝမျးသှားရငျ သှေးပါတာ။ ညောငျးတာ။ မအီမလယျနဲ့နရေတာ
အရမျးခကျခဲ့တာ …အခုဆို အရမျးကောငျးသှားပါပွီ။
ရှားစောငျးလကျပကျ အစိမျးကိုမီးဖုတျပွီး အတိုငျးဝါးစားလိုကျပါ ။တကွိမျပဲစားလိုကျ သိသာပါတယျ ၂ ခါဘဲစားလိုကျတာလုံးဝပြောကျကငျးသှားပါပွီ ။
အားလုံးကမျြးမာကွပါစေ…လိပျခေါငျးရောဂါ အတှကျ ကိုယျတှေ့ ဆေးနညျးပါတဲ့ဗြား…
ကြှနျတေျာ့မမေေ သှေးတိုးတုနျးကဆိုရငျ ရှားစောငျးလကျပတျကို အထဲက အသားကို ခွဈယူပီးတော့ သကွားနညျးနညျးထညျ့ ပွီးတော့သံပုရာသီး တခွမျး ညှဈထညျ့လိုကျ
ပွီးတော့မှလေိုကျ ရခေဲထညျ့ပွီးစားလိုကျတာ ၅ မိနဈတောငျမကွာဘူး ။ သှေးခြိနျလိုကျတော့ Nomel ပွနျဖွဈသှားတာ
လကျတှပေ့ါဗြ သှေးတိုးသမားတှအေတှကျတော့ ဆေးကောငျးတလကျပါဗြာ…။
ဒို့ကတော့ထကျခွမျးခှဲပွီး ဇှနျးနဲ့ခွဈ အနှဈယူကာ ပြားရညျနဲ့ ခေါကျသောကျပါတယျ။ အဆုတျနာတှလေဲ ကောငျးပါတယျဘေးမဖွဈပါ…။
ရှားစောငျးလကျပတျ ဆေးနညျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ဆေးနညျးတဈနညျးဖျေါပွ ပေးလိုကျပါတယျ..။ရှားစောငျးလကျပတျ ၂၅ ကပျြသား၊
မုနျ့လုပျထနျးလြှကျ ၂၅ ကပျြသား၊ မကညျြးသီးအစမေ့ပါ ၁၂ကပျြခှဲသားကွကျသှနျနီ ၅ ကပျြသားဆား ၁ ကပျြသား။ အထကျဖျေါပွပါ ငါးမြိုးထဲမှရှေးဦးစှာ ထနျးလြှကျကို
ဒနျအိုးနှငျ့အရငျ ကြိုပါ။ ထနျးလြှကျရညျကိုစဈထားပါ ။ ကနျြတာတှကေိုနုတျနုတျစဉျးထားပါ..။ ဆေးကြိုသညျ့အခါ ငပိကြိုသော မွအေိုးတဈလုံးလိုပါတယျ ။
မွအေိုးထဲကို ထနျးလြှကျရညျထညျ့ပွီး ကြိုပါ ။ ကွှကျမွီးတနျလို ပဈြလာလြှငျ ကနျြတာတှထေညျ့ပွီး မီးမြှငျးမြှငျးဖွငျ့ကြိုပါ ။မှပေေးပါ။ ပဈြခဲတဲ့အနရေောကျရငျ မီးဖိုပျေါမှ ခထြားလိုကျပါ။
အအေးခံပွီး ဖနျပုလငျးထဲထညျ့ထားပွီး မနကျတဈကွိမျ ညတဈကွိမျ ကှမျးသီးလုံးခနျ့စားပါ ။
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သှေးသားနှငျ့ပတျသကျသောရောဂါမြားနှငျ့ သှေးသားဖေါကျပွနျပွီး သှကျခြာပါဒ ရောဂါမြား ပြောကျကငျးစပွေီးအသားအရညျဝငျးပစပေါသညျ။
ရှားစောငျးလကျပကျက အပငျပါ။ လူတျောတျောမြားမြား သိပါတယျ။ ခေါငျးလြှျောရညျဘူးတှမှော ပါပါတယျ။
အသားအရအေတှကျ ကောငျးလို့အလှကုနျ တျောတျောမြားမြားမှာပါပါတယျ။သူကိုသုံးမယျဆိုဘေးကစောငျးလေးတှကေို လှီးလိုကျပါ။ အစေးဝါဝါလေးတှေ
တှရေ့မယျ ရဆေေးလိုကျပါ။ အလှနျခါးပါတယျ ။ ကနျြတာအတှငျးကဂယျြရော အပွငျကအခှနျရောစားလို့ရပါတယျ ။
ကောငျးတာကတော့အားလုံးပါဘဲ .. လူတဈကိုယျလုံးကို အာဟာရပေးပါတယျ။ အညာမှာ လူကွီးတှအေသကျရှညျ ကနျြးမာတာဒါတှစေားလို့ပါ။ တို့အမြိုးအားလုံး သုံးပါတယျ ။
အလှနျကောငျးလို့ ပွောမကုနျပါဘူး။ ဆီးဝမျးသှေးလေ အရိုး အရပွေား မကျြစိ ဝမျးတှငျးကလီစာ အားလုံးကိုအကြိုးပွုပါတယျ။
ကွိုကျသလိုသုံးပါ။ စားခငျြသလိုစားပါ ။အားလုံးအထောကျအကူဖွဈပါတယျ ။သကျရှညျ ကနျြးမာလှပ အပူငွိမျးအားရှိ မကျြစိကွညျ ဘာမဆိုသုံးလို့ရပါတယျ။
ရှားစောငျးလကျပတျကိုသုံးပွီးလို့ ကနျြတဲ့အခှံကိုလဲ ထကျခွမျးခွမျးပွီး မကျြနှာတှေ လကျတှမှော ပှတျရငျ အသားအရေ နုခြောပွီး ဖွူဖှေးတာတကယျပါ ။
ကာလသားရောဂါကွီးတှတေောငျ ပြောကျတယျတဲ့ ..။သူ့အစေးကိုဖွဈစေ အသားကိုဖွဈစေ စားပါ ။သူ့ကွီးပဲစားလဲရတယျ တကယျစှမျး…။
အတှငျးသားလေးကိုခွဈပွီး သံပုရာရညျလေးညှဈ ကွကျသှနျနီ ပုဇှနျခွောကျမှူနျ့လေးနဲ့သုပျစားလညျးကောငျးတယျ..။
ရှားစောငျးလကျပတျကို ရှမျးပြိုမယျနဲ့စားရငျ အသားအရေ စိုပွပွေီးပိနျသူကိုဝ စပေါတယျ။ရှားစောငျးလကျပတျက မွနျမာပွညျမှာရော
ဒီယိုးဒယားမှာလဲ ဟငျးခကျြစားတယျဗြ .. တကယျပါ။ ရှားစောငျးလကျပတျဆိုလို့ပွောရအုံးမယျ ။ရှားစောငျးအနှဈရယျ , မွနျမာကွကျဥတလုံး
နှမျးဆီကွကျဥတလုံးစာ၃မြိုးဆတူကွျောစား သှေးထှကျနတေဲ့လိပျခေါငျးတကယျပြောကျတယျ။ လကျတှပေ့ါ…။နားကိုကျလဲ..ကောငျးတယျ..မီးဖုတျပွီး..
အတှငျးသားကို..နားထဲဝငျလောကျတဲ့..အခြောငျးလေးလုပျပွီးကွပျပေးရငျ…( တဈကယျပွောတာပါ )
ရှားစောငျး လကျပတျ အစှမျးကပွောမကုနျ။ တဈခုပွောပါရစေ ။ရှားစောငျလကျပတျ လကျနှဈလုံးလောကျအရှယျ
အလကျတဈလကျကိုရစေငျအောငျစေးပွီး ဘေးက အဖုလေးတှဖေယျပွီး ကွိတျစကျနဲ့ကွိတျပါ ။ပွီးပြားရညျစဈစဈ
ဟငျးခြိုသောကျ ဇှနျး တဈဇှနျး တို့ကို ပေါငျးစပျမှပွေီး ဗူးအသနျ့တဈခုအတှငျးထညျ့ထားပွီး သာမနျဇှနျးတဈဇှနျခနျ့သောကျပေးပါ ။
ဆေးသောကျပွီး ၅ မိနဈမကွာ လသေကျပါလိမျ့မညျ။ ဘူး တဈလုံးဆောငျ အိုလို့တောငျ စိတျမဆငျးရဲရတော့ပါ ။မှတျခကျြ ။..။
နှဈရကျစာပဲဖြျောသောကျပါ လကျဆတျလကေောငျးလပေါ..။ ရှားစောငျးလကျပတျက ဆီးကြောကျတညျတာကတော့
လကျတှမေို့ အရမျးကောငျးတဲ့ဆေးပငျပါ ။ ၃ခှကျလောကျသောကျတာနဲ့ ကြောကျတှကြေ လာတော့တာပါ..။
မိဘမေတ္တာဆိုသည်မှာ သားသမီးအပေါ်တွင် ကုန်ခမ်းသွားသည်မရှိ အဆက်မပြတ်စီးဆင်းလျက်ရှိကာ ဒုက္ခကို တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံရင်း တတ်စွမ်းသလောက် သားသမီးများကို ရှာကျွေးကြသည်
ယခုအခါတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နိုင်းဟွမ်ပြည်နယ်ရှိ ခန်ဟိုင်းမြို့တွင် နေထိုင်သော အသက် ၇၃နှစ်အရွယ် အဖိုးအိုတစ်ယောက်သည် လမ်းဘေးတွင် ဂီတာလေးတီး သီချင်းလေးဆိုကာ တောင်းရမ်းစားသောက်မှုဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလျက်ရှိသည်
အဖိုးအိုသည် ဆင်းရဲမွဲတေသော ဘဝတွင် ကံဆိုးစွာဖြင့် အသက် ၇နှစ်အရွယ်က အကြီးကျယ်ဖျားပြီးနောက် မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကွယ်ခဲ့၍ သနားစရာ အမှောင်ချမျက်မမြင်ဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရသည် အဖိုးအို၏ မိသားစုမှာလည်း စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေကြ၍
အသက် ၁၃နှစ်ကစပြီး လမ်းဘေးမျက်မမြင် တောင်းစားသူအဖြစ် ဝင်ငွေရှာခဲ့သည် ထို့နောက်အဖိုးအိုသည် စိတ်ထားကောင်းသူနှင့် တွေ့ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန် ဂီတာတီး ပညာအား သင်ယူခဲ့ရပြီးနောက် ဘဝတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်
ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ကလေး ၅ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကလေး၅ယောက်လုံးသည် အိမ်ထောင်ကျကုန်ပြီး သူတို့အခက်အခဲနှင့် သူတို့ရှိနေ၍ မိဘနှစ်ပါးအား ထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိပဲ အဖိုးအိုခမျာ ဆက်လက်၍ လမ်းဘေးတောင်းရမ်းစားသောက်သူအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်
မိဘမတ်ေတာဆိုသညျမှာ သားသမီးအပျေါတှငျ ကုနျခမျးသှားသညျမရှိ အဆကျမပွတျစီးဆငျးလကျြရှိကာ ဒုက်ခကို တဈယောကျတညျးကွိတျခံရငျး တတျစှမျးသလောကျ သားသမီးမြားကို ရှာကြှေးကွသညျယခုအခါတှငျလညျး ဗီယကျနမျနိုငျငံ
နိုငျးဟှမျပွညျနယျရှိ ခနျဟိုငျးမွို့တှငျ နထေိုငျသော အသကျ ၇၃နှဈအရှယျ အဖိုးအိုတဈယောကျသညျ လမျးဘေးတှငျ ဂီတာလေးတီး သီခငျြးလေးဆိုကာ တောငျးရမျးစားသောကျမှုဖွငျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုလကျြရှိသညျ
အဖိုးအိုသညျ ဆငျးရဲမှဲတသေော ဘဝတှငျ ကံဆိုးစှာဖွငျ့ အသကျ ၇နှဈအရှယျက အကွီးကယျြဖြားပွီးနောကျ မကျြစိနှဈဖကျလုံးကှယျခဲ့၍ သနားစရာ အမှောငျခမြကျြမမွငျဘဝသို့ ရောကျရှိခဲ့ရသညျ အဖိုးအို၏ မိသားစုမှာလညျး စားဝတျနရေေးအဆငျမပွကွေ၍ အသကျ ၁၃နှဈကစပွီး
လမျးဘေးမကျြမမွငျ တောငျးစားသူအဖွဈ ဝငျငှရှောခဲ့သညျထို့နောကျအဖိုးအိုသညျ စိတျထားကောငျးသူနှငျ့ တှပွေီ့း အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပွုရနျ ဂီတာတီး ပညာအား သငျယူခဲ့ရပွီးနောကျ ဘဝတူအမြိုးသမီးတဈဦးနှငျ့ ဆုံတှခေဲ့ပွီး ကလေး ၅ယောကျကို
ပိုငျဆိုငျထားသညျ ကလေး၅ယောကျလုံးသညျ အိမျထောငျကကြုနျပွီး သူတို့အခကျအခဲနှငျ့ သူတို့ရှိနေ၍ မိဘနှဈပါးအား ထောကျပံ့နိုငျခွငျးမရှိပဲ အဖိုးအိုခမြာ ဆကျလကျ၍ လမျးဘေးတောငျးရမျးစားသောကျသူအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲဖွဈသညျ
“နှဈရှညျကွာ လဖွေတျထားသူပငျ အခြိနျ ၂ ပတျအတှငျး လမျးပွနျလြှောကျစနေိုငျတဲ့ မွနျမာ့ဆေးနညျး”
အိမ်မှာ လေဖြန်းထားတဲ့ အဖေတောင် သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးမို့ အားလုံးကို ကုသိုလ်အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လေဖြတ်လူနာတောင် ၂ ပတ်အတွင်း လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပယ်။အကြောညပ်၊ အဆစ်လွဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနာကျင်မှုဟူသမျှအပြင်
လေဖြတ်လူနာတောင် နှစ်ပတ်မကြာလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်..ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ပဲဖြစ်စေ ၊ အကြော
ညပ်လို့ပဲဖြစ်စေ ၊ အရိုးအကြောအဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနာကျင်မှုဟူသမျှအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တွင်းသုံးလိမ်းဆေးလေးပါ။
လေဖြတ်တာကိုသိတာနဲ့ အဲ့ဒီဆေးဖော်ပြီးလိမ်းပေးပါတယ်။နှစ်ပတ်မကြာဘူး။ လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြုစုဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ထိခိုက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေ သွေးထွက်လွန်ရင်လည်းဆေးရည်အနည်းငယ်လောင်းရုံနဲ့ သွေးတိတ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးကြီးပြုလုပ်ပုံကတော့…အရက်ဆီ ၊ဒီဇယ်ဆီ ၊နှမ်းဆီ ၊ရှောက်သီး….. အရည်ကိုညှစ်ယူရပါမယ်။ အထက်ပါအရည်များကို ဆတူရောနှောပါ။
ရှောက်သီးမှာပါတဲ့ အခွံကအစ အစေ့အဆုံး လွှင့်မပစ်ရပါ။ထိုအရည်ထဲတွင်ရောထည့်ပါ။ ထိုအရည်များကို အဝကျယ်ဖန်ပုလင်းအတွင်းကိုထည့်ပါ။
အဝတ်ချုပ်အပ်ကလေးငါးချောင်းထည့်လိုက်ပါဦး။ထို့နောက်နေပူလှန်းပါ။ ပုလင်းထဲမှအပ်ကလေးအရည်ပျော်သွားချိန်တွင် စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
ပုလင်းအဝကျယ်သုံးစေခြင်းမှာ ပုလင်းထဲရှိရှောက်ခွံများကိုနှိုက်ယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးလိမ်းလျှင်ထိုရှောက်ခွံကလေးများနှင့် နာကျင်သည့်နေရာကို အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်ပေးရပါမည်။
အကိုက်အခဲကြောင့် ဝေဒနာခံစားရသူများ အမြန်ဆုံးသက်သာာက်ကင်းကြပါစေ။
အလွန်အသုံးဝင်သော လိမ်းဆေးဖြစ်ပါသည်။ပြုလုပ်နည်းမခက်ပါ။ ကျန်းမာကြပါစေ။
အိမျမှာ လဖွေနျးထားတဲ့ အဖတေောငျ သကျသာပြောကျကငျးခဲ့တဲ့ နညျးလေးမို့ အားလုံးကို ကုသိုလျအဖွဈ မြှဝလေိုကျပါတယျ။
လဖွေတျလူနာတောငျ ၂ ပတျအတှငျး လမျးပွနျလြှောကျနိုငျတဲ့ မွနျမာ့ဆေးနညျးလေးဖွဈပယျ။အကွောညပျ၊ အဆဈလှဲ၊ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးနာကငျြမှုဟူသမြှအပွငျ
လဖွေတျလူနာတောငျ နှဈပတျမကွာလမျးပွနျလြှောကျနိုငျတဲ့ အိမျတှငျးဆေးနညျးလေးကို ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျနျော..ညောငျးညာကိုကျခဲလို့ပဲဖွဈစေ ၊ အကွော
ညပျလို့ပဲဖွဈစေ ၊ အရိုးအကွောအဆဈအမွဈ ကိုကျခဲနာကငျြခွငျးပဲဖွဈစခေန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးနာကငျြမှုဟူသမြှအတှကျ အထူးကောငျးမှနျတဲ့အိမျတှငျးသုံးလိမျးဆေးလေးပါ။
လဖွေတျတာကိုသိတာနဲ့ အဲ့ဒီဆေးဖျောပွီးလိမျးပေးပါတယျ။နှဈပတျမကွာဘူး။ လမျးပွနျလြှောကျနိုငျပါတယျ။စိတျရှညျလကျရှညျနဲ့ပွုစုဖို့တော့လိုပါလိမျ့မယျ။
ထိခိုကျပွတျရှဒဏျရာတှေ သှေးထှကျလှနျရငျလညျးဆေးရညျအနညျးငယျလောငျးရုံနဲ့ သှေးတိတျနိုငျပါတယျ။
ဆေးကွီးပွုလုပျပုံကတော့…အရကျဆီ ၊ဒီဇယျဆီ ၊နှမျးဆီ ၊ရှောကျသီး….. အရညျကိုညှဈယူရပါမယျ။ အထကျပါအရညျမြားကို ဆတူရောနှောပါ။
ရှောကျသီးမှာပါတဲ့ အခှံကအစ အစအေ့ဆုံး လှငျ့မပဈရပါ။ထိုအရညျထဲတှငျရောထညျ့ပါ။ ထိုအရညျမြားကို အဝကယျြဖနျပုလငျးအတှငျးကိုထညျ့ပါ။
အဝတျခြုပျအပျကလေးငါးခြောငျးထညျ့လိုကျပါဦး။ထို့နောကျနပေူလှနျးပါ။ ပုလငျးထဲမှအပျကလေးအရညျပြျောသှားခြိနျတှငျ စတငျအသုံးပွုလို့ရပါပွီ။
ပုလငျးအဝကယျြသုံးစခွေငျးမှာ ပုလငျးထဲရှိရှောကျခှံမြားကိုနှိုကျယူနိုငျရနျဖွဈသညျ။ ဆေးလိမျးလြှငျထိုရှောကျခှံကလေးမြားနှငျ့ နာကငျြသညျ့နရောကို အသားထဲစိမျ့ဝငျအောငျ ပှတျပေးရပါမညျ။
အကိုကျအခဲကွောငျ့ ဝဒေနာခံစားရသူမြား အမွနျဆုံးသကျသာာကျကငျးကွပါစေ။
အလှနျအသုံးဝငျသော လိမျးဆေးဖွဈပါသညျ။ပွုလုပျနညျးမခကျပါ။ ကနျြးမာကွပါစေ။
“အသညျးရောငျအသားဝါသမားမြားအတှကျ အလှနျကောငျးလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ”
အသည်းရောင်တာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ၊ ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာရှုထောင့်က သုံးသပ်တဲ့အခါ ၁–ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါ ၊ ၂–နာတာရှည် တငွေ့ငွေ့တအိအိ နဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါတို့ပဲပေါ့ ။
ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတဲ့ အသည်းရောဂါ သူက အစာမချေ ၊ အစာမကြေရာက စပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အသက် ( ၅ ) နှစ် ကနေ( ၁၄ ) နှစ်ကြား ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ် ။
ဖြစ်ချိန်မှာတော့ တော်တော်အခံရခက်ပါတယ် ၊ ပြင်းထန်တယ် ၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ကုလိုက်ရင် ၁–လွယ်လင့်တကူ ပျောက်ကင်းသွားမယ်။ ၂– ကျေနပ်စရာ ကောင်းတာကအသည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
သူ့မှာ ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည် ရင့်ကျက် မြင့်တက်လာတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့ တော်တော်လေးခဲယဉ်းသွားပါတယ် ။ ဒါက စံနစ်တကျ ကုသတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။နာတာရှည် အ သည်
းရောဂါ – နာတာရှည် အသည်းရောဂါ က တော်တော် သတိထားပြီး ကုရမှာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် အသက် ၃၀ နဲ့ ၄၀ ကျော် ဝန်းကျင်မှာ ပိုပြီး အဖြစ်များပါတယ် ။ နာတာရှည် အသ
ည်းရောဂါ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ် – အကြောင်းခံ အချက် အများချည်းထဲက ( ၇ ) ချက် လောက်ကိုပဲ အသိပေး ပြောချင်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါကို တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ စံနစ်တကျ မကုဘူးဆိုရင်
အသည်းဟာ ကျစ်သွားမယ်၊ ကျုံ့ သွားမယ်၊ ချူံ့သွားမယ်၊ ခြောက်သွားတာမျိုးထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ရိုးရာ မြန်မာ့ဆေးပညာမှာတော့ဖျဉ်းဆိုတာဖြစ်ပြီး အသည်းကင်ဆာထိ ဖြစ်နှိုင်ပါတယ် ။
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ – ၁ – အရက်အလွန်အကျွံ သောက်ခြင်း ၊( နှစ်ရှည်လများ သောက်တတ်တဲ့ သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။)၂ – အသည်းမှာ အဆီ နဲ့ အဆီဖုံးနေသူများ
( နေ့စဉ် အကြွပ် ၊ အပွ ၊ အရွကြော် စားသူတွေ မှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။) ၃ –မသန့်ရှင်းတဲ့ အစာ အာဟာရ၊ မှိုတက်တဲ့ အစာ၊ မှိုတက်ဆေးဝါး တွေ စားသုံးသူတွေ မှာ အဖြစ်များပါတယ် ။
၄ – အသည်းရောင်ပိုး တွေဟာ သွေး – သွေး ချင်း ကူးနိုင်ပါတယ် ။ ၅ – ချွေး ၊တံတွေး ၊ သုက် သွေး ၊ ဒါတင်မက တစ်ကိုယ်ရေ သန့်စင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိပ် ဓား ၊ ဆံပင်ရိတ်ဓား ၊
လက်သည်းညှပ် ၊ သောက်ရေခွက် စတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း ကူးတတ်ပါတယ် ။ ၆ – မူးယစ်ထုံထိုင်းဆေးဝါး သုံးစွဲရာကလည်း ကူးစက်တတ်ပါတယ် ။ ၇ – တာရှည်ဝမ်းကိုက်ခြင်း ၊ ဝမ်း ပျက် ခြင်းကို အချိန်မီ
မထိန်းသိမ်းတတ်ရင် အသည်းကရောင်ပြီး ပိုးမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ် ။အသည်းရောင် အသားဝါ လက္ခဏာ – ၁ – လူက နုံးခွေတတ်တယ် ၊ အားနည်းလာပြီး လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ်မရှိ ဖြစ်မယ် ၊ မောပန်းလာမယ် ။
၂ – ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ် ။ ၃ – အသက်ရှု မဝဘူး ။ ၄ – အရေပြားတွေ ယားယံမယ် ။ ၅ – ရင်ပြည့် ရင်ကယ်ဖြစ်မယ် ။ ( အစာ နည်းနည်း စားလိုက်ရုံနဲ့ ရင်ဘတ်ကော့ပြီး အနေကျဉ်းကြပ် တတ်ပါတယ် ။)
၆ – ညာဘက်နံရိုးအောက်မှာ မာပြီး တောင့်နေတာ ရှိတတ်တယ် ။ ၇ – ရေ သောက်လိုစိတ်နည်းပြီး သောက်ရင်လည်း အန်လိုစိတ်ပေါ်တတ်တယ် ။ ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာရင် အသည်းရောင်စ ပြုနေပြီ ၊
အသည်းကို အသက်အတွက် ချွေမသွားဘဲ နဲ့ အ သက်ရဲ့ အရံအတားအဖြစ် အသည်းကို စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံး အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ မီးဖိုချောင်ကို ဆေးခန်းလို့ မြင်ပြီး
အိမ်တွင်းမှာ ကုလို့ ရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဒီနေရာမှာ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးကူညီလမ်းညွှန်မှု ပေးချင်ပါတယ် ။ ကုသနည်း – အသည်းက ကျစ် ၊ ရောင် ၊ မာ ၊ ရှုံ့ သွားတာမှာ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ
အရသာ သုံးမျိုးက အသည်းအတွက် ပဓာန အကျဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။ ၁ – အချဉ် ဖျော့ဖျော့ ၊ ၂ – အခါး ၊ ၃ – အေးတဲ့ အစာ ၊ ချဉ်၊ ခါး ၊ အေး ကို အလှည့်ကျ စားပေးရင် အသည်းအတွက် အကောင်းဆုံး
ကာကွယ်နည်း ဖြစ်သလို ကု သရာလည်း ရောက်ပါတယ် ။ အချဉ် – အသည်းအတွက် အချဉ် က မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး ရှု ထောင့်က ကြည့်ရင် မက်လင်ချဉ် ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
မက်လင်ချဉ်ကို ထန်း လျက် ၃ လုံးနဲ့ ပွက်ပွက်ဆူအောင်ပြုတ် ၊ ဆား မီးဖုတ်ထည့်ပြီး နံ နက် ည တစ်ဖန်ခွက်စီ သောက်ပေးခြင်းနဲ့ အချဉ် ဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာ ရောက်ပါတယ် ။
အခါး – အခါးမှာ တောင်ဆီးဖြူနဲ့ ခန်းတောက်မြစ်ဟာ အသည်းရောင်နဲ့ အသည်းပိုးတွေအတွက် ကာကွယ်ရာလည်းကျ ၊ စောင့် ရှောက်ရာလည်း ရောက်ပါတယ် ။ တောင်ဇီးဖြူ နှစ်ပင်ကို ထန်းလျက် ၂ ခဲ နဲ့ ပြုတ် ၊
ဆားမီးဖုတ်ထည့် ပြီး သောက်ပါ ။ ခန်းတောက်မြစ်လည်း ဒီလိုပဲ ထန်းလျက် သင့်ရုံ ဆားမီးဖုတ် အနည်းငယ်တို့နဲ့ ပြုတ်သောက်ပါ ။ရေချိုးတဲ့ အခါမှာ အခါးရွက် ပြုတ်ရည် ထည့်ချိုးပါ ။ တင်းတောင့်ခြင်း ၊
ရောင်ယမ်းခြင်း ၊ လေးလံခြင်း တို့ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ် ။ အအေး – အအေးစာအ နေနဲ့ကတော့ ကျောက်ဖရုံသီး ဟင်းချို ချက်သောက်မယ် ၊ ၊ ဗူးသီးနုနု ၊ သခွားသီး နုနု ၊ ဖရဲသီး ချို လေးတွေ ကို စားပေးရပါမယ် ။
ကန်ဇွန်းရိုးနီ ၊ ဗူးညွန့် ၊ ခဝဲညွန့် ၊ ဂေါ်ရခါးညွန့် တို့ကိုလည်း ပြုတ် ၊ သုပ် ၊ ဟင်းချို အဖြစ် စားနိုင်ပါတယ် ။ ကြော်မစားသင့်ပါ ။အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အရ သာ သုံးမျိုးကို စားတဲ့အခါ အချဉ် (၃ )ရက် ၊
အခါး ( ၃) ရက် ၊ အအေး ( ၃)ရက် ပေါင်း( ၉ ) ရက် စားမယ် ။အဲ့သလိုချည်း အလှည့်ကျ စားပေးနေမယ်ဆိုရင် ကာကွယ်ရာလည်း ကျသလို ကုသရာလည်းရောက်ပါတယ် ။
အသညျးရောငျတာ နှဈမြိုးရှိပါတယျ ၊ ရိုးရာတိုငျးရငျးဆေးပညာရှုထောငျ့က သုံးသပျတဲ့အခါ ၁ – ရုတျတရကျဖွဈလာတဲ့ရောဂါ ၊ ၂ – နာတာရှညျ တငှငှေ့ေ့ တအိအိ နဲ့ ဖွဈလာတဲ့ရောဂါတို့ပဲပေါ့ ။
ရုတျတရကျ ဖွဈလာတဲ့ အသညျးရောဂါ သူက အစာမခြေ ၊ အစာမကွရောက စပွီး ဖွဈပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အသကျ ( ၅ ) နှဈ ကနေ( ၁၄ ) နှဈကွား ကလေးငယျတှမှော အဖွဈမြားပါတယျ ။
ဖွဈခြိနျမှာတော့ တျောတျောအခံရခကျပါတယျ ၊ ပွငျးထနျတယျ ၊ မှနျမှနျကနျကနျကုလိုကျရငျ ၁ – လှယျလငျ့တကူ ပြောကျကငျးသှားမယျ။ ၂ – ကနြေပျစရာ ကောငျးတာက အသညျးနဲ့ပတျသကျပွီး
သူ့မှာ ခံနိုငျရညျစှမျးရညျ ရငျ့ကကျြ မွငျ့တကျလာတော့ နောကျတဈကွိမျဖွဈဖို့ တျောတျောလေးခဲယဉျးသှားပါတယျ ။ ဒါက စံနဈတကြ ကုသတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။
နာတာရှညျ အ သညျးရောဂါ – နာတာရှညျ အသညျးရောဂါ က တျောတျော သတိထားပွီး ကုရမှာဖွဈပါတယျ။မြားသောအားဖွငျ့ အသကျ ၃၀ နဲ့ ၄၀ ကြျော ဝနျးကငျြမှာ ပိုပွီး အဖွဈမြားပါတယျ ။
နာတာရှညျ အသညျးရောဂါ ဘာ့ကွောငျ့ဖွဈ – အကွောငျးခံ အခကျြ အမြားခညျြးထဲက ( ၇ ) ခကျြ လောကျကိုပဲ အသိပေး ပွောခငျြပါတယျ။ အသညျးရောဂါကို တတျကြှမျးသူနဲ့ စံနဈတကြ မကုဘူးဆိုရငျ
အသညျးဟာ ကဈြသှားမယျ ၊ ကြုံ့ သှားမယျ ၊ ခြူံ့သှားမယျ ၊ ခွောကျသှားတာမြိုးထိ ဖွဈတတျပါတယျ ။ ရိုးရာ မွနျမာ့ဆေးပညာမှာတော့ ဖဉျြးဆိုတာဖွဈပွီး အသညျးကငျဆာထိ ဖွဈနှိုငျပါတယျ ။
ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးတှကေတော့ – ၁ – အရကျအလှနျအကြှံ သောကျခွငျး ၊( နှဈရှညျလမြား သောကျတတျတဲ့ သူတှမှော ဖွဈတတျပါတယျ ။)၂ – အသညျးမှာ အဆီ နဲ့ အဆီဖုံးနသေူမြား
( နစေ့ဉျ အကွှပျ ၊ အပှ ၊ အရှကွျော စားသူတှေ မှာလညျး ဖွဈတတျပါတယျ ။) ၃ – မသနျ့ရှငျးတဲ့ အစာ အာဟာရ ၊ မှိုတကျတဲ့ အစာ ၊ မှိုတကျဆေးဝါး တှေ စားသုံးသူတှေ မှာ အဖွဈမြားပါတယျ ။
၄ – အသညျးရောငျပိုး တှဟော သှေး – သှေး ခငျြး ကူးနိုငျပါတယျ ။ ၅ – ခြှေး ၊တံတှေး ၊ သုကျ သှေး ၊ ဒါတငျမက တဈကိုယျရေ သနျ့စငျပစ်စညျးတှဖွေဈတဲ့ မုတျဆိတျရိပျ ဓား ၊ ဆံပငျရိတျဓား ၊
လကျသညျးညှပျ ၊ သောကျရခှေကျ စတဲ့ပစ်စညျးတှကေလညျး ကူးတတျပါတယျ ။ ၆ – မူးယဈထုံထိုငျးဆေးဝါး သုံးစှဲရာကလညျး ကူးစကျတတျပါတယျ ။ ၇ – တာရှညျဝမျးကိုကျခွငျး ၊ ဝမျး ပကျြ ခွငျးကို အခြိနျမီ
မထိနျးသိမျးတတျရငျ အသညျးကရောငျပွီး ပိုးမြိုးစုံနဲ့ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ ။အသညျးရောငျ အသားဝါ လက်ခဏာ – ၁ – လူက နုံးခှတေတျတယျ ၊ အားနညျးလာပွီး လုပျခငျြ ကိုငျခငျြစိတျမရှိ ဖွဈမယျ ၊ မောပနျးလာမယျ ။
၂ – ကိုယျအလေးခြိနျကမြယျ ။ ၃ – အသကျရှု မဝဘူး ။ ၄ – အရပွေားတှေ ယားယံမယျ ။ ၅ – ရငျပွညျ့ ရငျကယျဖွဈမယျ ။ ( အစာ နညျးနညျး စားလိုကျရုံနဲ့ ရငျဘတျကော့ပွီး အနကေဉျြးကွပျ တတျပါတယျ ။)
၆ – ညာဘကျနံရိုးအောကျမှာ မာပွီး တောငျ့နတော ရှိတတျတယျ ။ ၇ – ရေ သောကျလိုစိတျနညျးပွီး သောကျရငျလညျး အနျလိုစိတျပျေါတတျတယျ ။ ဒီလိုရောဂါလက်ခဏာတှေ ဖွဈလာရငျ အသညျးရောငျစ ပွုနပွေီ ၊
အသညျးကို အသကျအတှကျ ခြှမေသှားဘဲ နဲ့ အ သကျရဲ့ အရံအတားအဖွဈ အသညျးကို စောငျ့ရှောကျတတျဖို့အလှယျကူဆုံး အထိရောကျဆုံး ဖွဈတဲ့ မီးဖိုခြောငျကို ဆေးခနျးလို့ မွငျပွီး
အိမျတှငျးမှာ ကုလို့ ရမယျ့ အခကျြလေးတှကေို ဒီနရောမှာ အတှအေ့ကွုံနဲ့ ပေါငျးစပျပွီးကူညီလမျးညှနျမှု ပေးခငျြပါတယျ ။ ကုသနညျး – အသညျးက ကဈြ ၊ ရောငျ ၊ မာ ၊ ရှုံ့ သှားတာမှာ ဘယျလိုပဲ ဖွဈပါစေ
အရသာ သုံးမြိုးက အသညျးအတှကျ ပဓာန အကဆြုံး ဖွဈပါတယျ ။ ၁ – အခဉျြ ဖြော့ဖြော့ ၊ ၂ – အခါး ၊ ၃ – အေးတဲ့ အစာ ၊ ခဉျြ၊ ခါး ၊ အေး ကို အလှညျ့ကြ စားပေးရငျ အသညျးအတှကျ အကောငျးဆုံး
ကာကှယျနညျး ဖွဈသလို ကု သရာလညျး ရောကျပါတယျ ။ အခဉျြ – အသညျးအတှကျ အခဉျြ က မွနျမာတိုငျးရငျးဆေး ရှုထောငျ့က ကွညျ့ရငျ မကျလငျခဉျြ ဟာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ ။
မကျလငျခဉျြကို ထနျး လကျြ ၃ လုံးနဲ့ ပှကျပှကျဆူအောငျပွုတျ ၊ ဆား မီးဖုတျထညျ့ပွီး နံ နကျ ည တဈဖနျခှကျစီ သောကျပေးခွငျးနဲ့ အခဉျြ ဓာတျကို ဖွညျ့ဆညျးပေးရာ ရောကျပါတယျ ။
အခါး – အခါးမှာ တောငျဆီးဖွူနဲ့ ခနျးတောကျမွဈဟာ အသညျးရောငျနဲ့ အသညျးပိုးတှအေတှကျ ကာကှယျရာလညျးကြ ၊ စောငျ့ ရှောကျရာလညျး ရောကျပါတယျ ။ တောငျဇီးဖွူ နှဈပငျကို ထနျးလကျြ ၂ ခဲ နဲ့ ပွုတျ ၊
ဆားမီးဖုတျထညျ့ ပွီး သောကျပါ ။ ခနျးတောကျမွဈလညျး ဒီလိုပဲ ထနျးလကျြ သငျ့ရုံ ဆားမီးဖုတျ အနညျးငယျတို့နဲ့ ပွုတျသောကျပါ ။ရခြေိုးတဲ့ အခါမှာ အခါးရှကျ ပွုတျရညျ ထညျ့ခြိုးပါ ။ တငျးတောငျ့ခွငျး ၊
ရောငျယမျးခွငျး ၊ လေးလံခွငျး တို့ သကျသာပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ ။ အအေး – အအေးစာအ နနေဲ့ကတော့ ကြောကျဖရုံသီး ဟငျးခြို ခကျြသောကျမယျ ၊ ၊ ဗူးသီးနုနု ၊ သခှားသီး နုနု ၊ ဖရဲသီး ခြို လေးတှေ ကို စားပေးရပါမယျ ။
ကနျဇှနျးရိုးနီ ၊ ဗူးညှနျ့ ၊ ခဝဲညှနျ့ ၊ ဂျေါရခါးညှနျ့ တို့ကိုလညျး ပွုတျ ၊ သုပျ ၊ ဟငျးခြို အဖွဈ စားနိုငျပါတယျ ။ ကွျောမစားသငျ့ပါ ။အထကျက ပွောခဲ့တဲ့ အရ သာ သုံးမြိုးကို စားတဲ့အခါ အခဉျြ (၃ )ရကျ ၊
အခါး ( ၃) ရကျ ၊ အအေး ( ၃)ရကျ ပေါငျး( ၉ ) ရကျ စားမယျ ။အဲ့သလိုခညျြး အလှညျ့ကြ စားပေးနမေယျဆိုရငျ ကာကှယျရာလညျး ကသြလို ကုသရာလညျးရောကျပါတယျ ။
မကြာသေးမီက Marvel antihero Deadpool အဖြစ်ဝတ်ဆင်ထားသော cosplayer အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ နာမကျန်းဖြစ်နေသောကလေးတစ်ဦးထံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကဲ့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဟာ cosplayer အပေါ်ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Cosplayer ဟာ Facebook ရှိ Painkiller Cosplay page မှာ post တစ်ခုဖြင့်
သူမည်မျှစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကို ရှည်လျားတဲ့စာတစ်စောင်ဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အဆိုပါ Cosplayer အမျိုးသားဟာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေသူ Amy ထံမှ ဖုန်း call တစ်ခုရခဲ့ပြီး Amy က သူ့အား ဦးနှောက်ကင်ဆာရှိနေတဲ့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်
ကောင်လေးဖြစ်တဲ့ Tony ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ Tony ရဲ့မိသားစုက သူ့အတွက် လာမဲ့စနေနေ့မှာ ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးနေခဲ့ပေးမဲ့ Tony က အခြေအနေဆိုးလာခဲ့ပြီး မိဘများကလည်း ကောင်လေးက စနေနေ့အထိ အသက်ရှင်ဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါဘူး။
ထို့ကြောင့် သူဟာ Tony အတွက် cosplayer လုပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။ မိဘများက အင်္ဂါနေ့မှာ ဆေးရုံသို့လာရန်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ spider man အဖြစ် cosplay မဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Aaron က မအားလပ်တာကြောင့် တာဝန်အရ အဆိုပါ cosplayer
ဟာ ဆေးရုံသို့ Cosplayer Care အဖွဲ့နှင့်အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Tony ရဲ့အခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါ မိဘများနှင့် အားလုံးလိုလိုက Tony အား အသက်ရှင်နေနိုင်ရန် ငွေကြေးများစွာကို အကုန်အကျခံကာကြိုးစားပေးနေခဲ့တာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ထို့နောက် သူဟာ Deadpool ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန် အခန်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်ခဲ့ပြီးနောက် Tony ရဲ့အိပ်ယာနားဘေးသို့ ချက်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ Tony ဟာ ကင်ဆာကြောင့်မလှုပ်နိုင်၊ မပြောနိုင်တော့ကြောင်း သူနာပြုဆရာမတစ်ဦးက သူ့အား ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်မှာ Tony ဟာ သတိရှိနေပုံရပြီး Tony အား စကားအနည်းငယ်ပြောခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို သူက “ ကောင်လေးက အသက်ရှူစက်နှင့်ပြွန်မှတဆင့် အစာစားနေရတယ်၊ သူက အသက်မဲ့ပုံပေါ်တယ်၊ သူအသက်ရှူနေလားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ ငါသူ့ရင်ဘတ်ကို ငေးကြည့်နေခဲ့ရတယ်၊အဲ့တာနဲ့
အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ သူ့မျက်လုံးတွေကပွင့်လာပြီး သူကငါ့မျက်လုံးတွေကို စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ် ၊ အဲ့တာနဲ့ ငါသူ့လက်ကို တင်းကျပ်စွာကိုင်ထားလိုက်ပြီး သူကဘယ်လောက်သန်မာကြောင်း၊ သူဘယ်လောက်သတ္တိရှိကြောင်းကို ငါပြောပေးနိုင်ခဲ့တယ် ” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ နောက်ဆုံး Tony လေးလူ့လောကထဲထွက်မသွားခင်အချိန်လေးမှာ Tony ဟာ မည်မျှသန်မာပြီး မည်မျှရဲရင့်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ post ဟာ သူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာအတွက် ထောက်ခံမှုနှင့်ကြည်ညိုလေးစားမှုများစွာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သူ့အား ကျေးဇူးတင်စကားပြောကာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ လူတစ်ထောင်နီးပါးရှိသလို ၎င်း post ဟာ share ပေါင်း ၇,၅၀၀ အထိရှိခဲ့ပါတယ်။
Crd-Mia (KB Chimmy One)
မကွာသေးမီက Marvel antihero Deadpool အဖွဈဝတျဆငျထားသော cosplayer အမြိုးသားတဈဦးဟာ နာမကနျြးဖွဈနသေောကလေးတဈဦးထံသို့ သှားရောကျလညျပတျခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးကဲ့သို့ သှားရောကျလညျပတျခွငျးဟာ cosplayer အပျေါကွီးမားသော သကျရောကျမှုရှိစခေဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ Cosplayer ဟာ Facebook ရှိ Painkiller Cosplay page မှာ post တဈခုဖွငျ့
သူမညျမြှစိတျထိခိုကျသှားခဲ့ရတဲ့အတှအေ့ကွုံကို ရှညျလြားတဲ့စာတဈစောငျဖွငျ့ အသေးစိတျဖျောပွပေးခဲ့ပါတယျ။ တဈနေ့ တနင်ျလာနမေ့နကျခငျးတဈခုမှာ အဆိုပါ Cosplayer အမြိုးသားဟာ ရနျပုံငှရှောဖှသေူ Amy ထံမှ ဖုနျး call တဈခုရခဲ့ပွီး Amy က သူ့အား ဦးနှောကျကငျဆာရှိနတေဲ့ အသကျ ၁၁ နှဈအရှယျ
ကောငျလေးဖွဈတဲ့ Tony ရဲ့အကွောငျးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ Tony ရဲ့မိသားစုက သူ့အတှကျ လာမဲ့စနနေမှေ့ာ ပှဲတဈခုကိုစီစဉျပေးနခေဲ့ပေးမဲ့ Tony က အခွအေနဆေိုးလာခဲ့ပွီး မိဘမြားကလညျး ကောငျလေးက စနနေအေ့ထိ အသကျရှငျဖို့မမြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါဘူး။
ထို့ကွောငျ့ သူဟာ Tony အတှကျ cosplayer လုပျပွီး သရုပျဆောငျပေးရနျ တောငျးဆိုခံခဲ့ရပါတယျ။ မိဘမြားက အင်ျဂါနမှေ့ာ ဆေးရုံသို့လာရနျဆိုခဲ့ပမေဲ့ spider man အဖွဈ cosplay မဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ Aaron က မအားလပျတာကွောငျ့ တာဝနျအရ အဆိုပါ cosplayer ဟာ
ဆေးရုံသို့ Cosplayer Care အဖှဲ့နှငျ့အတူ လိုကျပါသှားခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ Tony ရဲ့အခနျးသို့ရောကျတဲ့အခါ မိဘမြားနှငျ့ အားလုံးလိုလိုက Tony အား အသကျရှငျနနေိုငျရနျ ငှကွေေးမြားစှာကို အကုနျအကခြံကာကွိုးစားပေးနခေဲ့တာကို မွငျခဲ့ရပါတယျ။
ထို့နောကျ သူဟာ Deadpool ဝတျစုံကိုဝတျဆငျရနျ အခနျးတဈခုထဲသို့ဝငျခဲ့ပွီးနောကျ Tony ရဲ့အိပျယာနားဘေးသို့ ခကျြခငျြးသှားရောကျခဲ့ပမေဲ့ Tony ဟာ ကငျဆာကွောငျ့မလှုပျနိုငျ၊ မပွောနိုငျတော့ကွောငျး သူနာပွုဆရာမတဈဦးက သူ့အား ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ထိုအခြိနျမှာ Tony ဟာ သတိရှိနပေုံရပွီး Tony အား စကားအနညျးငယျပွောခဲ့ရတဲ့အကွောငျးကို သူက “ ကောငျလေးက အသကျရှူစကျနှငျ့ပွှနျမှတဆငျ့ အစာစားနရေတယျ၊ သူက အသကျမဲ့ပုံပျေါတယျ၊ သူအသကျရှူနလေားဆိုတာကိုကွညျ့ဖို့ ငါသူ့ရငျဘတျကို
ငေးကွညျ့နခေဲ့ရတယျ၊အဲ့တာနဲ့ အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ သူ့မကျြလုံးတှကေပှငျ့လာပွီး သူကငါ့မကျြလုံးတှကေို စိုကျကွညျ့နခေဲ့တယျ ၊ အဲ့တာနဲ့ ငါသူ့လကျကို တငျးကပျြစှာကိုငျထားလိုကျပွီး သူကဘယျလောကျသနျမာကွောငျး၊ သူဘယျလောကျသတ်တိရှိကွောငျးကို ငါပွောပေးနိုငျခဲ့တယျ ” ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ နောကျဆုံး Tony လေးလူ့လောကထဲထှကျမသှားခငျအခြိနျလေးမှာ Tony ဟာ မညျမြှသနျမာပွီး မညျမြှရဲရငျ့တဲ့အကွောငျးကို ပွောပွခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ post ဟာ သူလုပျပေးခဲ့တဲ့အရာအတှကျ ထောကျခံမှုနှငျ့ကွညျညိုလေးစားမှုမြားစှာကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ သူ့အား ကြေးဇူးတငျစကားပွောကာမှတျခကျြပေးခဲ့ကွတဲ့ လူတဈထောငျနီးပါးရှိသလို ၎င်းငျး post ဟာ share ပေါငျး ၇,၅၀၀ အထိရှိခဲ့ပါတယျ။
“လူပြို အပြို အိမျထောငျသညျလားဆိုတာကို ခှဲခွားနိုငျသော ရိုးရာမဖကျြသေးတဲ့ရှားပါးတဲ့ သြှောငျပစေူး ရှာကလေး”
မင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျိုလား၊
ပိုင်ဆိုင်သူရှိပြီးသား အိမ်ထောင်ရှင်လားဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်တဲ့ ကျေးရွာလေးတစ်ရွာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် မအံ့သြဘဲနေမယ့်သူ သိပ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုဘိုးဘွားစဉ်ဆက် အခုအချိန်အထိ တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ မိန်းကလေးနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအားလုံး ဆံရစ်ဝိုင်းနဲ့ သျှောင်ပေစူးလေးတွေ ကိုယ်စီ ထားကြပါတယ်။
ရွာလေးရဲ့ နာမည်က ရေပုတ်ကြီးလို့ ခေါ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ထဲက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲလှတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရေပုတ်ကြီးရွာလို့ ဆိုလိုက်ရင် ဆံရစ်ဝိုင်းနဲ့တွဲပြီး သိကြတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောကြပါတယ်။
တစ်ရွာလုံးက မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေးတွေက နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ် ဘဝကတည်းကစတင်ပြီး ရိုးရာဆံပင်ပုံစံ ထားကြတာပါ။အခုလောလောဆယ်ရွာမှာ ဆံရစ်ဝိုင်းထားသူစုစုပေါင်း ၆၇၄ ယောက်ရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ်အလိုက် ဆံပင်ပုံစံ အခေါ်အဝေါ် မတူ မိန်းကလေးတွေထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ဆံရစ်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပြီး ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ရိုးရာဆံပင်ပုံစံကိုတော့ သျှောင်ပေစူးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဆံပင်ပုံစံကို ရင်ခွင်ပိုက် ကလေးငယ် အရွယ်လေးတွေမှာ စတင် ထားကြတာပါ။
လသားအရွယ်မှာ ငယ်ထိပ်ပေါ်မှာ ဦးစွန်းဖုတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ဆံပင်လေးကို ပထမဆုံး စထားပါတယ်။ အဲဒီဆံပင်ပုံစံကို ကြည့်ပြီး သူဟာမိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ကလေးအရွယ်သာ ရှိပါသေးတယ်လို့ ဖော်ပြတာဖြစ်ကြောင်းရေပုတ်ကြီးရွာသူမပြုံးပြုံးရီက ပြောပါတယ်။
ကလေးတွေ သုံးနှစ်လေးနှစ် အရွယ်ရောက်တော့ အဲဒီဆံပင်လေးကို ကြက်တောင်စည်းလေး စတင်စည်းလာပါတယ်။ ဒါကမိခင်ရင်ခွင်မှာ နို့စို့နေတဲ့ အရွယ်ကနေ ကင်းလွတ်ပြီး လမ်းလျှောက် ကစားနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
တခါအသက်၉ နှစ်၁ဝနှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခကြက်တောင်စည်းလေးတွေရှည်လာပြီး မိန်းကလေးတွေကဆံရစ်ဝိုင်းပေါ်မှာဆံထုံးလေးတွေထုံးလို့ ရလာကြပြီး၊ယောက်ျားလေးတွေကလည်းသျှောင်ပေစူးလေးတွေ စထုံးလို့ ရလာကြပါပြီ။
အဲဒါကသားတို့ သမီးတို့ဟာ ကျောင်းနေအရွယ် ရောက်ကြပါပြီလို့ဆံပင်နဲ့ပုံဖော်ပြသတာ ဖြစ်တယ်လို့ မပြုံးပြုံးရီက ပြောပါတယ်။ အဲဒီကတဆင့် မိန်းကလေးတွေ၁၅နှစ်၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ဂျပန်ဆံထောက်လို့ခေါ်တဲ့ဆံထောက်ဆံပင်ထားကြပါတယ်။
အဲဒီဆံပင်ပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ ကလေးဘဝ အရွယ်ကျော်လွန်လို့အပျိုဖော်ဝင်လာတဲ့ အရွယ်ပါလို့ ဆံပင်နဲ့ ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၇ နှစ် ၁၈ နှစ်ရောက်တော့ ဂျပန်ဆံထောက် နောက်ကောက်လို့ ခေါ်တဲ့ နားနောက်မှာ ဆံထောက်ကွေးလေးတွေထားတဲ့ ပုံစံပြောင်းလဲ ထားကြပါတယ်။
ဒီမိန်းကလေးက အပျိုလေးဖြစ်ပါပြီ၊ ချစ်ချင်သူတွေ ချစ်လို့ရပါပြီ၊ပိုးချင်ပန်းချင်သူတွေလည်း ပိုးပန်းလို့ရပါပြီလို့ အဲဒီဆံပင်က ဖော်ပြပါတယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားကို နှုတ်ကနေဖွင့်ဟ မပြောဘဲ ဆံပင်လေးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီး ပြောတာလို့ ရှေးလူကြီးသူမတွေက ပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး မပြုံးပြုံးရီရဲ့ မိခင်နဲ့အဘွား ပြန်ပြောပြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဆံရစ်ဝိုင်း တွေဖြုတ်လိုက်ပြီး ဆံပင်ကိုအုပ်လုံးသိမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့မှာအုပ်ထိန်းသူ လင်ယောက်ျားရှိပါပြီ၊ ပိုးပန်းချင်သူတွေ မချစ်ကြ မပိုးပန်းကြပါနဲ့တော့လို့ ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘဝ ခံစားချက် ငယ်ငယ်တုန်းက အနီးဝန်းကျင်က ရွာတွေသွားတဲ့အခါဆံရစ်ဝိုင်းနဲ့ ဆံပင်ပုံကို ကြက်ချေးပုံ နွားချေးပုံခေါင်းမှာ တင်ထားတာလို့ စကြနောက်ကြတာတွေခံရလို့ ဆံရစ်ဝိုင်းကို ဘာကြောင့်များ ထားပေးရတာလဲ ဒီဆံပင်မထားချင်တော့ဘူးလို့ မိဘတွေကို ပြန်ပြောခဲ့မိတယ်လို့ မပြုံးပြုံးရီက ပြောပါတယ်။
မိဘတွေက ကဲ့ရဲ့ တာတွေ ဂရုမစိုက်ဖို့နဲ့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက အစဉ်အလာမပျက် ထားခဲ့တဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဆံရစ်ဝိုင်းလေးတွေ ထားတာလို့ ရှင်းပြခဲ့ပြီး အခုတော့ နားလည်လာပါပြီလို့ သူကပြောပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကတော့ ရှင်ပြုတဲ့အရွယ် ခေါင်းတုံးတုံး ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆံရစ်ဝိုင်းကို ဆက်မထားတော့ဘဲသာမန်ဘိုကေပုံစံထားကြတာများတယ်လို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အလယ်တန်း အထက်တန်းကျောင်းမရှိ အိမ်ခြေ ၆၅၀ လောက်ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ရေပုတ်ကြီး ရွာကလေးဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းတဲ့အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်း နိမ့်ကျတယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
စာသင်ကျောင်းဆိုလို့လည်း လေးတန်းအထိသာ သင်နိုင်တဲ့ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းသာရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကမှ အဲဒီကျောင်းလေးက အလယ်တန်းကျောင်း အဆင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အလယ်တန်းကျောင်းကနေ အထက်တန်းကျောင်း အဆင့်အထိဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အခြေအနေကလည်း နည်းပါးသေးတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ သူတို့ရွာနဲ့အနီးဆုံး အထက်တန်းကျောင်းက ၈ မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ ရှောက်တောကျေးရွာမှာပဲ ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသော ရေပုတ်ကြီးရွာသား တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရွာကနေမြို့ကိုသွားနိုင်တဲ့ အနေအထား မရှိတဲ့အတွက် ရွာမှာပညာထွန်းပေါက်သူကလည်း ရှားပါးတယ်၊ တက္ကသိုလ်အထိ တက်နိုင်သူက ရေပုတ်ကြီးရွာ တစ်ရွာလုံးမှာ တစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အမတ်နဲ့ ရွာခံလူတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီကျောင်းသားက ကိုနိုင်အေးဆိုတဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်ဖြစ်ပြီးအခုမကွေးနည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နေတာနောက်ဆုံးနှစ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ မောင်နှမ ငါးယောက်ရှိတဲ့ ကိုနိုင်အေးက သူ့ထက်ငယ်တဲ့ ညီတွေညီမတွေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျကုန်ကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ပညာသင်နိုင်တဲ့ အထိဖြစ်လာဖို့ သူကြိုးစားခဲ့ရတာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။မူလတန်းကျောင်းသာရှိတဲ့ ရေပုတ်ကြီးရွာကနေ၄တန်းအောင်တော့ ရွာနဲ့ ၈ မိုင်ဝေးတဲ့ ရှောက်တောရွာအထိ နေ့စဉ်နေပူပူ မိုးရွာရွာ စက်ဘီးနင်းပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်လို့ ကိုနိုင်အေးက ပြောပါတယ်။
လမ်းတဝက်က မြေနီလမ်း၊ ကျန်လမ်းတဝက်သာ ကျောက်လမ်းရှိအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲသွားခဲ့ရတဲ့ ဒီခရီးကို၅ တန်းကနေ ၉တန်းအထိနေ့စဉ်စက်ဘီးနဲ့ကျောင်းတက်ခဲ့တာပါ။၁ဝတန်းနှစ်ရောက်တော့ဘော်ဒါနေရင်းကျောင်းတက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးကသည်း စက်ဘီးကလည်းပျက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ လမ်းမပေါ် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ငိုနေခဲ့မိပြီး ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ သူကပြန်ပြောပြပါတယ်။
အခုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က မြေနီလမ်းလေးဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် အရင်ကထက်သွားရေးလာရေး ပိုမိုလှယျကူလာပွီမို့ကလေးတှတေခွားရှာအလှယျတကူသှားပွီးအထကျတနျးကြောငျးတကျနိုငျကွပွီလို့ရှာသားတွှေေပောပါတယျ။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျရေပုတ်ကြီးရွာဟာမိုးခေါင်ရေရှားအရပ်ဒေသမှာတည်ရှိတဲ့အတွက် ရေရှားပါးလှပါတယ်။
လက်ခပ်ရေတွင်းတွေကိုသာ အသုံးပြုကြရပြီး နွေရာသီရာက်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီတွင်းတွေကရေတွေခန်းခြောက်သွားတဲ့အတွက် ရေပြတ်လပ်တဲ့ ဒုက္ခကိုနှစ်စဉ် ကြုံရတတ်တယ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။ တစ်ရွာလုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးလည်း မရှိသေးပါဘူး။
အခုတော့ ရိုးရာဓလေ့ကို အမြတ်တနိုး လက်ဆင့်ကမ်း
ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ရိုးသားတဲ့ရေပုတ်ကြီး ရွာလေးအကြောင်းတစတစသိလာကြပြီးအနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေလည်း ပိုများလာကြပါပြီ။ ရေပုတ်ကြီး ရွာသူရွာသားတွေကတော့ သူတို့ရွာလေး ပိုမိုတိုးတက်လာစေဖို့ မျှော်လင့် နေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေးကဘိုးဘွားရိုးရာအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့သျှောင်ပေစူး၊ ဆံရစ်ဝိုင်းထားတဲ့ဓလေ့ကို ညောင်ဦးမြို့နယ် စက်စက်ယိုရွာ၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ရေပုတ်ကြီးရွာ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ဆံရစ်ဝိုင်းရွာတို့ကို ယနေ့အထိ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်
မင်ျဂလာပါ စာဖတျပရိတျသတျကွီးရေ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဆံပငျပုံစံကို ကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ အပြိုလား၊
ပိုငျဆိုငျသူရှိပွီးသား အိမျထောငျရှငျလားဆိုတာ ခှဲခွားနိုငျတဲ့ ကြေးရှာလေးတဈရှာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိနတေယျဆိုရငျ မအံ့သွဘဲနမေယျ့သူ သိပျရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။
မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှု ဓလထေုံ့းတမျးတှကေိုဘိုးဘှားစဉျဆကျ အခုအခြိနျအထိ တနျဖိုးထား ထိနျးသိမျးကွတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအလယျပိုငျးက ရှာလေးတဈရှာမှာ မိနျးကလေးနဲ့ ယောကျြားလေးတှအေားလုံး ဆံရဈဝိုငျးနဲ့ သြှောငျပစေူးလေးတှေ ကိုယျစီ ထားကွပါတယျ။
ရှာလေးရဲ့ နာမညျက ရပေုတျကွီးလို့ ချေါပါတယျ။မကှေးတိုငျး ပှငျ့ဖွူမွို့နယျထဲက လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲလှတဲ့နရောမှာ တညျရှိပါတယျ။ ရပေုတျကွီးရှာလို့ ဆိုလိုကျရငျ ဆံရဈဝိုငျးနဲ့တှဲပွီး သိကွတယျလို့ ရှာသားတှကေ ပွောကွပါတယျ။
တဈရှာလုံးက မိနျးကလေး၊ ယောကျြားလေးတှကေ နို့စို့အရှယျ ကလေးငယျ ဘဝကတညျးကစတငျပွီး ရိုးရာဆံပငျပုံစံ ထားကွတာပါ။အခုလောလောဆယျရှာမှာ ဆံရဈဝိုငျးထားသူစုစုပေါငျး ၆၇၄ ယောကျရှိပါတယျ။
အသကျအရှယျအလိုကျ ဆံပငျပုံစံ အချေါအဝျေါ မတူ မိနျးကလေးတှထေားတဲ့ ဆံပငျပုံစံကို ဆံရဈဝိုငျးလို့ချေါပွီး ယောကျြားလေးတှရေဲ့ ရိုးရာဆံပငျပုံစံကိုတော့ သြှောငျပစေူးလို့ ချေါပါတယျ။ ဒီဆံပငျပုံစံကို ရငျခှငျပိုကျ ကလေးငယျ အရှယျလေးတှမှော စတငျ ထားကွတာပါ။ လသားအရှယျမှာ ငယျထိပျပျေါမှာ
ဦးစှနျးဖုတျလို့ ချေါတဲ့ ဆံပငျလေးကို ပထမဆုံး စထားပါတယျ။အဲဒီဆံပငျပုံစံကို ကွညျ့ပွီး သူဟာမိခငျရဲ့ရငျခှငျမှာ ခိုလှုံနတေဲ့ ကလေးအရှယျသာ ရှိပါသေးတယျလို့ ဖျောပွတာဖွဈကွောငျးရပေုတျကွီးရှာသူမပွုံးပွုံးရီက ပွောပါတယျ။
ကလေးတှေ သုံးနှဈလေးနှဈ အရှယျရောကျတော့ အဲဒီဆံပငျလေးကို ကွကျတောငျစညျးလေး စတငျစညျးလာပါတယျ။ ဒါကမိခငျရငျခှငျမှာ နို့စို့နတေဲ့ အရှယျကနေ ကငျးလှတျပွီး လမျးလြှောကျ ကစားနိုငျတဲ့ အရှယျရောကျပွီဆိုတာ ဖျောပွတဲ့သဘောဖွဈပါတယျ။
တခါအသကျ၉ နှဈ၁ဝနှဈအရှယျရောကျတဲ့အခကွကျတောငျစညျးလေးတှရှေညျလာပွီး မိနျးကလေးတှကေဆံရဈဝိုငျးပျေါမှာဆံထုံးလေးတှထေုံးလို့ ရလာကွပွီး၊ယောကျြားလေးတှကေလညျးသြှောငျပစေူးလေးတှေ စထုံးလို့ ရလာကွပါပွီ။
အဲဒါကသားတို့ သမီးတို့ဟာ ကြောငျးနအေရှယျ ရောကျကွပါပွီလို့ဆံပငျနဲ့ပုံဖျောပွသတာ ဖွဈတယျလို့ မပွုံးပွုံးရီက ပွောပါတယျ။ အဲဒီကတဆငျ့ မိနျးကလေးတှေ၁၅နှဈ၁၆နှဈအရှယျရောကျတော့ဂပြနျဆံထောကျလို့ချေါတဲ့ဆံထောကျဆံပငျထားကွပါတယျ။
အဲဒီဆံပငျပုံကိုကွညျ့ပွီး ဒီမိနျးကလေးတှဟော ကလေးဘဝ အရှယျကြျောလှနျလို့အပြိုဖျောဝငျလာတဲ့ အရှယျပါလို့ ဆံပငျနဲ့ ဖျောပွတာဖွဈပါတယျ။ ၁၇ နှဈ ၁၈ နှဈရောကျတော့ ဂပြနျဆံထောကျ နောကျကောကျလို့ ချေါတဲ့ နားနောကျမှာ ဆံထောကျကှေးလေးတှထေားတဲ့ ပုံစံပွောငျးလဲ ထားကွပါတယျ။
ဒီမိနျးကလေးက အပြိုလေးဖွဈပါပွီ၊ ခဈြခငျြသူတှေ ခဈြလို့ရပါပွီ၊ပိုးခငျြပနျးခငျြသူတှလေညျး ပိုးပနျးလို့ရပါပွီလို့ အဲဒီဆံပငျက ဖျောပွပါတယျ။ ကိုယျပွောခငျြတဲ့စကားကို နှုတျကနဖှေငျ့ဟ မပွောဘဲ ဆံပငျလေးတှနေဲ့ပုံဖျောပွီး ပွောတာလို့ ရှေးလူကွီးသူမတှကေ ပွောခဲ့တယျဆိုပွီး မပွုံးပွုံးရီရဲ့ မိခငျနဲ့အဘှား ပွနျပွောပွတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အိမျထောငျကသြှားတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ဆံရဈဝိုငျး တှဖွေုတျလိုကျပွီး ဆံပငျကိုအုပျလုံးသိမျးလိုကျကွပါတယျ။ ဆိုလိုတာက သူ့မှာအုပျထိနျးသူ လငျယောကျြားရှိပါပွီ၊ ပိုးပနျးခငျြသူတှေ မခဈြကွ မပိုးပနျးကွပါနဲ့တော့လို့ ဖျောပွတာဖွဈပါတယျ။
ကလေးဘဝ ခံစားခကျြ ငယျငယျတုနျးက အနီးဝနျးကငျြက ရှာတှသှေားတဲ့အခါဆံရဈဝိုငျးနဲ့ ဆံပငျပုံကို ကွကျခြေးပုံ နှားခြေးပုံခေါငျးမှာ တငျထားတာလို့ စကွနောကျကွတာတှခေံရလို့ ဆံရဈဝိုငျးကို ဘာကွောငျ့မြား ထားပေးရတာလဲ ဒီဆံပငျမထားခငျြတော့ဘူးလို့ မိဘတှကေို ပွနျပွောခဲ့မိတယျလို့ မပွုံးပွုံးရီက ပွောပါတယျ။
မိဘတှကေ ကဲ့ရဲ့ တာတှေ ဂရုမစိုကျဖို့နဲ့ဘိုးဘှားလကျထကျကတညျးက အစဉျအလာမပကျြ ထားခဲ့တဲ့ ရိုးရာယဉျကြေးမှုကို ထိနျးသိမျးတဲ့အနနေဲ့ ဆံရဈဝိုငျးလေးတှေ ထားတာလို့ ရှငျးပွခဲ့ပွီး အခုတော့ နားလညျလာပါပွီလို့ သူကပွောပါတယျ။
အမြိုးသားတှကေတော့ ရှငျပွုတဲ့အရှယျ ခေါငျးတုံးတုံး ပွီးတဲ့နောကျမှာ ဆံရဈဝိုငျးကို ဆကျမထားတော့ဘဲသာမနျဘိုကပေုံစံထားကွတာမြားတယျလို့ပှငျ့ဖွူမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
အလယျတနျး အထကျတနျးကြောငျးမရှိ အိမျခွေ ၆၅၀ လောကျရှိပွီး လူဦးရေ ၃၀၀၀ ကြျောရှိတဲ့ ရပေုတျကွီး ရှာကလေးဟာ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး မကောငျးတဲ့အတှကျ ဒသေဖှံ့ဖွိုးမှုကလညျး နိမျ့ကတြယျလို့ဒသေအာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။
စာသငျကြောငျးဆိုလို့လညျး လေးတနျးအထိသာ သငျနိုငျတဲ့ မူလတနျးကြောငျး တဈကြောငျးသာရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈကမှ အဲဒီကြောငျးလေးက အလယျတနျးကြောငျး အဆငျ့ဖွဈလာတယျလို့ လှတျတျောအမတျ ဦးထှနျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
အလယျတနျးကြောငျးကနေ အထကျတနျးကြောငျး အဆငျ့အထိဖွဈလာနိုငျဖို့ အခွအေနကေလညျး နညျးပါးသေးတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။ သူတို့ရှာနဲ့အနီးဆုံး အထကျတနျးကြောငျးက ၈ မိုငျအကှာမှာရှိတဲ့ ရှောကျတောကြေးရှာမှာပဲ ရှိပါတယျ။
တဈဦးတညျးသော ရပေုတျကွီးရှာသား တက်ကသိုလျကြောငျးသားရှာကနမွေို့ကိုသှားနိုငျတဲ့ အနအေထား မရှိတဲ့အတှကျ ရှာမှာပညာထှနျးပေါကျသူကလညျး ရှားပါးတယျ၊ တက်ကသိုလျအထိ တကျနိုငျသူက ရပေုတျကွီးရှာ တဈရှာလုံးမှာ တဈယောကျပဲရှိသေးတယျလို့ ပှငျ့ဖွူမွို့နယျအမတျနဲ့ ရှာခံလူတှကေ ပွောပါတယျ။
အဲဒီကြောငျးသားက ကိုနိုငျအေးဆိုတဲ့ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ လူငယျဖွဈပွီးအခုမကှေးနညျးပညာ တက်ကသိုလျမှာ ပညာသငျနတောနောကျဆုံးနှဈကို ရောကျနပေါပွီ။ မောငျနှမ ငါးယောကျရှိတဲ့ ကိုနိုငျအေးက သူ့ထကျငယျတဲ့ ညီတှညေီမတှကေ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အိမျထောငျကကြုနျကွပွီလို့ ဆိုပါတယျ။
တက်ကသိုလျပညာသငျနိုငျတဲ့ အထိဖွဈလာဖို့ သူကွိုးစားခဲ့ရတာလညျး လှယျလှယျကူကူတော့ မဟုတျပါဘူး။မူလတနျးကြောငျးသာရှိတဲ့ ရပေုတျကွီးရှာကနေ၎တနျးအောငျတော့ ရှာနဲ့ ၈ မိုငျဝေးတဲ့ ရှောကျတောရှာအထိ နစေ့ဉျနပေူပူ မိုးရှာရှာ စကျဘီးနငျးပွီး ကြောငျးတကျခဲ့ရတယျလို့ ကိုနိုငျအေးက ပွောပါတယျ။
လမျးတဝကျက မွနေီလမျး၊ ကနျြလမျးတဝကျသာ ကြောကျလမျးရှိအတှကျ ခကျခကျခဲခဲသှားခဲ့ရတဲ့ ဒီခရီးကို၅ တနျးကနေ ၉တနျးအထိနစေ့ဉျစကျဘီးနဲ့ကြောငျးတကျခဲ့တာပါ။၁ဝတနျးနှဈရောကျတော့ဘျောဒါနရေငျးကြောငျးတကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
မိုးကသညျး စကျဘီးကလညျးပကျြတဲ့ အခါမြိုးမှာ လမျးမပျေါ တဈယောကျတညျး ထိုငျငိုနခေဲ့မိပွီး ကြောငျးဆကျမတကျခငျြတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတျမြိုးတှေ ပျေါပေါကျခဲ့ဖူးတယျလို့ သူကပွနျပွောပွပါတယျ။
အခုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှဈက မွနေီလမျးလေးဖောကျလုပျခဲ့တဲ့အတှကျ အရငျကထကျသှားရေးလာရေး ပိုမိုလှယကြူလာပှီမို့ကလေးတှတခှေားရှာအလှယတြကူသှားပှီးအထကတြနြးကွောငြးတကနြိုငကြှပှီလို့ရှာသားတှေေပောပါတယြ။ ဒသေဖှံ့ဖွိုးမှုနိမျ့ကရြပေုတျကွီးရှာဟာမိုးခေါငျရရှေားအရပျဒသေမှာတညျရှိတဲ့အတှကျ ရရှေားပါးလှပါတယျ။
လကျခပျရတှေငျးတှကေိုသာ အသုံးပွုကွရပွီး နှရောသီရာကျတဲ့ အခါမှာ အဲဒီတှငျးတှကေရတှေခေနျးခွောကျသှားတဲ့အတှကျ ရပွေတျလပျတဲ့ ဒုက်ခကိုနှဈစဉျ ကွုံရတတျတယျလို့ ရှာခံတှကေ ပွောပါတယျ။ တဈရှာလုံးမှာ လြှပျစဈမီးလညျး မရှိသေးပါဘူး။
အခုတော့ ရိုးရာဓလကေို့ အမွတျတနိုး လကျဆငျ့ကမျး
ထိနျးသိမျးကွတဲ့ရိုးသားတဲ့ရပေုတျကွီး ရှာလေးအကွောငျးတစတစသိလာကွပွီးအနယျနယျအရပျရပျကလာရောကျလညျပတျတဲ့ဧညျ့သညျတှလေညျး ပိုမြားလာကွပါပွီ။ ရပေုတျကွီး ရှာသူရှာသားတှကေတော့ သူတို့ရှာလေး ပိုမိုတိုးတကျလာစဖေို့ မြှျောလငျ့ နကွေပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာရှေးကဘိုးဘှားရိုးရာအမှအေနှဈဖွဈတဲ့သြှောငျပစေူး၊ ဆံရဈဝိုငျးထားတဲ့ဓလကေို့ ညောငျဦးမွို့နယျ စကျစကျယိုရှာ၊ ပှငျ့ဖွူမွို့နယျ ရပေုတျကွီးရှာ၊ နှားထိုးကွီးမွို့နယျ ဆံရဈဝိုငျးရှာတို့ကို ယနအေ့ထိ ထိနျးသိမျးထားပါသညျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတျကွီးတို့ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ခရကျဒဈ